Freedom Uprising: September 2007
(ကိုနေမိုးရေ လူချင်းမသိပေမယ့် အကိုရဲ့ အကြုံပြုချက်တွေဟာ လက်ရှိ ဗမာ့နိုင်ငံရေးအတွက် အကောင်းဆုံး အကြံဥာဏ်တွေ ဖြစ်နေလို့ ပို့စ်အသစ်အနေနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။)
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်တွေ ဦးဆောင်ကျင်းပတဲ့ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု လူတန်းစားအားလုံးရဲ့ တရားမျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ် ဖော်ဆောင်ရေး ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေ အရှိန်အဟုန်မြင့်လာတာဟာ ဒီနေ့ ၂၄ရက်နေ့မှာဆိုရင် ဦးဆောင် သံဃာတော်များ ကြေငြာထားတဲ့အတိုင်း တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အထွေထွေသပိတ်ကြီးကို အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ သံဃာတော်များရဲ့ မေတ္တာစိတ်နဲ့ တောင်းဆိုချက်များကို ပြည်သူလူထုက ပူးပေါင်းထောက်ခံ ပြလိုက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုကသာ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရမယ့် ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီစစ်စစ်ကိုသာ လိုချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ပြည်သူလူထုရဲ့ အမှန်တကယ် စိတ်ဆန္ဒကို ဖော်ထုတ်ပြလိုက်တာပါပဲ။
အချိန်ကာလ အနေနဲ့ကတော့ ၁၈ရက်နေ့က စပြီးရေတွက်မယ်ဆိုရင် ၇ ရက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒီလောက်အတိုင်းအတာအထိ ရောက်ရှိလာတာဟာ အောင်မြင်မှုရတယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။ စစ်ဗိုလ်တွေဖက်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့ဟာ ငြိမ်နေပါတယ်။ ငြိမ်နေခြင်းမှာ အဓိပ္ပါယ်နှစ်မျိုးထွက်ပါတယ်။ အကောင်းဖက်ကို ဦးတည်မလား အဆိုးဖက်ကို ဦးတည်မလား သေချာပေါက်တော့ သူတို့တွေ တခုခု လုပ်လာပါတော့မယ်။ စစ်တပ်အတွင်းမှာ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်သင့်တဲ့ အကြောင်းကိစ္စများကို သဘောထား ကွဲလွဲနေကြလို့ အများသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ကျအောင် ညှိနှိုင်းနေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလုပ်ရမယ်မှန်း သေသေချာချာ မဆုံးဖြတ်နိုင်ကြလို့ ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ အဖြေရှာမရနိုင်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သာသနာရေးဝန်ကြီး သူရမြင့်မောင်ကတော့ သံဃာထုနှင့် လူထုတွေရဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ရပ်တန့်ဖို့နဲ့ ဆက်လုပ်လာပါက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းရမယ်ဆိုပြီး မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းအစီအစဉ်ကနေ ဒီနေ့မှာ ပြောလာပါပြီ။ စစ်တပ်အနေနဲ့ အသံနဲ့ ခြောက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်တမ်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားလို့ ကြေငြာလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်အနေနဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမှန်း မသိတာနဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ သွေးတိုးစမ်း ခြေလှမ်းကို စလှမ်းလိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စစ်တပ်က ဒီလိုပြောလိုက်တာနဲ့ ဘာတွေ ဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ချင်တဲ့ သဘောလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီစကားမျိုးကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကိုယ်စား ပြောလာတာဟာ အကြီးအကျယ် မှားယွင်းမှုတခုပါပဲ။ ဒီကနေ့ သံဃာထုနဲ့ ပြည်သူလူထုဟာ တပ်မတော်တခုလုံးကို မေတ္တာထားပြီး တိုင်းပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာရေးအတွက် စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း စွန့်လွှတ် အနစ်နာခံလိုမှုတွေကို အရင်းတည်ပြီး စေ့စပ်ဆွေးနွေးရေးအတွက် တောင်းဆိုချီတက်နေကြတာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ကျူးလွန်ပြစ်မှားမိတာတွေကို သင်ပုန်းချေ ခွင့်လွှတ်ကြေအေးဖို့ ကမ်းလှမ်းနေတာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို တောင်းဆိုနေတာပါ။
မေတ္တာရေစင်နဲ့ ဖြန်းပက်လာတဲ့ သပြေခက်ကို လက်နဲ့ပုတ်ပြီး ခြေနဲ့နင်းဖို့တော့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ အသိတရားရှိရှိ ထားပြီး နားလည်လက်ခံစေချင်ပါတယ်။ မေတ္တာတရားကို အကြမ်းဖက်လမ်းစဉ်တွေနဲ့ ဖိနှိပ်အနိုင်ယူဖို့ ကြိုးစားလာမယ်ဆိုရင်တော့ သူလည်းနာ ကိုယ်လည်းနာ နှာခေါင်းသွေးအပျက်ပျက်နဲ့ အဖြစ်အပျက်ဆိုးတွေနဲ့ ဇာတ်သိမ်းရမယ့်အဖြစ်မျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ဒါကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ သေသေချာချာ စဉ်းစားပြီး သံဃာထုနဲ့ ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုတာတွေကို လိုက်လျောဖို့ ပြန်လည် ဆုံးဖြတ်သင့်ပါတယ်။
သံဃာတော်တွေနဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကတော့ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲ ရှေ့ဆက်ဖြစ်လာပါစေ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ အဆင့်သင့် ပြင်ဆင်ပြီးသားပါ။ နောက်ဆုံး သာသနာအကျိုး တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် အသက်ကိုပါ စွန့်လွှတ်ဖို့အထိ သံဃာတော်တွေ ကျောင်းသားတွေ ပြည်သူလူထုတွေက ရဲရင့်စွာ ဆုံးဖြတ်ထားကြပြီးသားပါ။ တိုင်းပြည်အကျိုးအတွက် ဒီတပွဲကတော့ အောင်မြင်အောင် အစွမ်းကုန် ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့် အချိန်ကို ရောက်နေပြီဆိုတာ သံဃာတော်ထုနှင့် ပြည်သူလူထုတရပ်လုံးက နားလည်လက်ခံပြီးသား ဖြစ်နေပါပြီ။ ဒီတပွဲကတော့ အနိုင်ရအောင် မဖြစ်မနေ ပေးဆပ်ရင်းနှီးရပါလိမ့်မယ်။ သာသနာတော်ကို တစွန်းတစလေး ထိပါးမိလိုက်တာလေးနဲ့တင် အခုလို အခြေအနေတွေ ဖြစ်လာတာပါ။ သာသနာတော်နှင့်တကွ သံဃာထုတရပ်လုံးအရေး၊ ပြည်သူလူထုနှင့်တကွ အမျိုးသားတရပ်လုံးအရေး၊ မျိုးဆက်သစ်များနှင့် တိုင်းပြည်၏အနာဂါတ်အရေးတို့ကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေအနေနဲ့ ထိပါး နှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးဖြိုခွဲလာမယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ ဆိုးကျိုးတွေကိုပဲ ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်စေချင်တယ်။ ဒါဟာ မလွဲမသွေ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့လာရမယ့် သဘာဝ အမှန်တရား ထုတ်ဖော်ချက်တခုလည်း ဖြစ်တယ်။
သံဃာတော်တွေမှာလည်း တနေ့ပြီးတနေ့ ပွဲဆက်လာတာဟာ တော်တော်ပင်ပန်းလာနေပါပြီ။ စိတ်ဓာတ်အင်အားရှေ့ဆောင်မှုနဲ့ ချီတက်နေရတယ် ဆိုပေမယ့် အစာ အာဟာရ လိုအပ်မှုကြောင့် ရေရှည်အတွက်တော့ အင်အားထိခိုက်မှုတွေ ရှိလာနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာရင်တော့ အခုအချိန်ထိ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားလာတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာ ရေရှည်အကျိုးကို ထိခိုက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီပွဲဟာ မြန်မြန်ပြတ်လေ ကောင်းလေပါပဲ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားကလည်း အခုလုပ်ရင် အခုဖြစ်တယ် ဒီနေ့လုပ်ရင် ဒီနေ့ဖြစ်တယ် ဘာအကြောင်းနဲ့မှ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို အချိန်မဆွဲသင့်ဘူးလို့ ဟောပြလမ်းညွှန်ထားတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ အခုတခါ ဒီပွဲကိုလည်း အချိန်တိုတိုအတွင်း ထိထိရောက်ရောက်နဲ့ အကျိုးရလဒ်ကောင်းတွေ ရလာဖို့ အမြန်ဆုံး အကောင်အထည်ဖော် လုပ်ဆောင်သင့်နေပါပြီ။
ဒီနေ့ဆိုရင် ဦးဆောင်သံဃာတော်များ ကြေငြာဖိတ်ခေါ်ထားသလို တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ အထွေထွေသပိတ်ကြီးမှာ ကျောင်းသားပြည်သူတွေ တတပ်တအား ပါဝင်လာကြပါပြီ။ နောက်တဆင့်အနေနဲ့ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေကို ကြေငြာဖိတ်ခေါ်ဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဦးဆောင် သံဃာတော်များအနေနဲ့ အခုလာမယ့် ၂၇ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့ကစပြီး တပြိုင်တည်း အစိုးရ၀န်ထမ်းအားလုံးကို တနိုင်ငံလုံးအနှံ့ မြို့တိုင်းမြို့တိုင်းမှာ ရုံးမတက်ပဲ ကိုယ့်အိမ်တွေမှာနေပြီး နေမကောင်းလို့ခွင့်တိုင်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ ရုံးမတက်ပဲ အစိုးရကို သံဃာတော်များရဲ့ တောင်းဆိုချက်များကို ဆောင်ရွက်မပေးသေးသရွေ့ သပိတ်မှောက်ကြဖို့ တိုက်တွန်း ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်။ အခုလာမယ့် ၂၇ရက် ကြာသပတေးနေ့ပါ။ အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေ ရုံးမတက်ပဲ နေလိုက်ခြင်းအားဖြင့် စစ်တပ်ကို နောက်ခံပြုပေးနေတဲ့ အစိုးရယန္တယား လည်ပတ်မှုတွေအားလုံး ရပ်တန့်သွားမှာပါ။ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်မလုပ်ပေးရင် ဒီစစ်ဗိုလ်တွေ အနေနဲ့ အစိုးရတရပ်အဖြစ် ဘယ်လိုမှ ခေါင်းထောင်နေလို့မရနိုင်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နောက်တဆင့်ခြေလှမ်းအနေနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအတွက် ရက်ချိန်းခေါ်ပြီး တပြိုင်တည်း လုပ်ဆောင်နိုင်အောင် ဦးဆောင်သံဃာတော်များက ပန်ကြားပေးစေချင်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေပါလာရင် စစ်ဗိုလ်တွေဟာ အစိုးရအဆင့်အနေနဲ့ ရပ်တည်လို့ မရနိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်ဆုံးကတော့ ကျေးလက်ဒေသအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများကို ဒေသဆိုင်ရာ မြို့နယ်အလိုက် ကိုယ့်မြို့တွေမှာရှိတဲ့ သံဃာတော်တွေရဲ့ မေတ္တာပို့လမ်းလျှောက် သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြပွဲတွေကို ထောက်ခံအားပေးဖို့ ပန်ကြားဖိတ်ခေါ် ပေးသင့်ပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို အခြေခံအကျဆုံး ခံစားနေရတဲ့ ကျေးလက်ဒေသက တောင်သူလယ်သမား ဦးကြီးများကို ချန်ထားလို့ မဖြစ်ပါဘူး။ အချိန်အခါအရလည်း မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ဖို့ သင့်တော်လှပါတယ်။ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများ ဆိုတာကလည်း အများစုက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပါပဲ။ သူတို့လည်း အခုလို အချိန်အခါမှာ တတပ်တအား သံဃာတော်များနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင် ထောက်ခံဖို့ စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေမှာ အမှန်ပါပဲ။
တပ်မတော်အတွင်းက မျိုးချစ်စစ်သားတွေအတွက်ကိုလည်း အထူးအရေးပေးပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့ အဆက်မပြတ် တောင်းဆို နေတာကတော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ တချိန်မဟုတ် တချိန်တော့ နားဝင် လက်ခံလာမှာပါ။ အဲဒီလို အဖက်ဖက်က အင်အားစုတွေ ပေါင်းစည်းမိလာတဲ့ အချိန်မှာတော့ နောက်လာမယ့်အပါတ်မှာ `အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ထောက်ခံသည်´ `၁၉၉၀ပြည့်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရ အမတ်လောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်သာ ဖွဲ့စည်းအပ်သည့် လူထုအစိုးရကိုသာ ထောက်ခံသည်´ ဆိုတဲ့ ထပ်ဆင့် တောင်းဆိုချက်များကို တိုးမြှင့်တောင်းဆိုရင်း ငြိမ်းချမ်းစွာ အချိန်တိုတိုအတွင်းမှာ ထိရောက်အောင်မြင်မှုရအောင် ဆက်လက်ချီတက် အင်အားပြသင့်ပါသည်။ အဲဒီအချိန်ဆိုရင် တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား အမှန်တွေ ဒီနေ့ထက်ပိုပြီး ပေါင်းစည်း အားကောင်းလာမှာပါ အမှန်ပါပဲ။ တတိုင်းတပြည်လုံးက လူထုလူတန်းစားတွေအားလုံးရဲ့ စည်းလုံးညီညွှတ်တဲ့ သဘောထားတွေ ထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ သူတို့လုပ်ချင်တာ ဘာတခုမှ လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပဲ အများဆန္ဒအရ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို အဆုံးသတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အကြံပြုချက်။ ။ ဦးဆောင် သံဃာတော်များအနေဖြင့် ပန်ကြားဆော်သြပေးပါရန် ရိုသေလေးမြတ်စွာ လက်ဆယ်ဖြာထိပ်မှာမိုးလျှက်
၂။ ကြံခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းဝင်များကိုလည်း ၂၇ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့မှစတင်၍ အသင်းဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း အဆို တင်သွင်းကြခြင်းဖြင့် သံဃာထုနှင့် ပြည်သူလူထုကို ပူးပေါင်းထောက်ခံကြပါရန်။
၃။ ၂၇ရက်နေ့ ကြာသပတေးနေ့မှစတင်၍ ကျေးလက်ဒေသမှ တောင်သူလယ်သမားဦးကြီးများကို လက်လှမ်းမီသလောက် အုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ဒေသဆိုင်ရာမြို့များသို့တက်၍ မေတ္တာပို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြသော သံဃာထုများနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ပါရန်။
Posted by freeburma at 8:28 AM0comments
လူ့ပြည်လူ့ရွာ၏ အချိန် ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်၊ နေ့လည် ၁၂း၀၀ နာရီခန့်တွင် ငရဲပြည်တွင် ဆူညံပွက်လော ရိုက်သံများဖြင့် တစာစာ အော်ဟစ်မြည်တမ်းသံများကို ကြားလိုက်ရသဖြင့် ယမမင်းကြီးက ၎င်း၏ အရာရှိများအား စုံစမ်းစေရာ ငရဲသူငရဲသားများ ထကြွသောင်းကျန်းနေကြောင်း သိရှိရသဖြင့် စုံစမ်းရန် (သို့) ဖြေရှင်းရန် (သို့) နှိမ်နင်းရန်အတွက် အခင်းဖြစ်ရာ မဟာအ၀ီစိငရဲသို့ နောက်လိုက်အင်အား အပြည့်အစုံဖြင့် သွားရောက်ခဲ့ပါသည်။
အခင်းဖြစ်ပွားရခြင်း အကြောင်းရင်းကို အဓိပ္ပာယ်မယွင်းရလေအောာင် မူရင်း အသံသွင်းချက်အတိုင်း အောက်တွင် ဖော်ပြ လိုက်ရပါသည်။
"ကဲ အသင်မောင်မင်းတို့ ဘာတွေများ ဆူညံဆူညံ လုပ်နေရတာတုန်း။"
"အကျွန်တို့ရဲ့ အပြစ်ကျတော့ အရှင်မင်းကြီးတို့က အပြစ်ပေးတယ်။ သူတို့ကျတော့ရော"
"သူတို့ကို အကျွန်တို့နဲ့ အတူတူ မထားရဘူး ဘုရား။"
"သူတို့ကိုမှ အပြစ်မပေးရင် အကျွန်တို့လည်း မခံဘူး။"
"ဟေ့ အေးအေးဆေးဆေး ပြောကြပါကွယ်ရို့။"
"နေ .. နေကြပါအုံး။ မောင်မင်းတို့ ဒီလို တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ပြောနေရင် ဘယ်လို လိုရင်းရောက်မှာလဲ"
"ဘယ်သူခေါင်းဆောင်လဲ။ အဲဒီလူ ရှေ့ထွက်ခဲ့။ အဲဒီလူနဲ့ပဲ စကားပြောမယ်။"
"ဘာလဲ အရှင်မင်းကြီးက ခေါင်းဆောင်ကို ဖမ်းချုပ်ပြီး ပိုကြီးလေးတဲ့ အပြစ်ပေးမလို့လား။ အကျွန်တို့ အကုန်လုံးက ခေါင်းဆောင်ပဲ။"
"မလွယ်ပါလားကွယ်ရို့။ မင်းတို့ ဒီလို ဆူညံဆူညံပြောနေရင် ဘယ်လိုလုပ် ငါက ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာလဲ။"
"ငါ့ရှင် ဒေ၀ဒတ် ထွက်ပါ။"
"အားလုံး တိတ်တိတ်နေကြစမ်း။ ဟုတ်ပြီ မောင်မင်း ဒေ၀ဒတ် ထွက်ခဲ့ပါ။ အခုဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လဲ။ ဘာတွေကို လိုချင်လာရပြန်တာတုံး။"
"လူ့ပြည်လူ့ရွာရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ ထွန်းကားရာ ဗမာပြည်မှာ ဘုရားမရှိ၊ တရားမသိ၊ သံဃာမလေးတဲ့ သာသနာဖျက်များ သောင်းကျန်းမင်းမူလျက် ရှိကြောင်း ကြားသိရပါတယ် အရှင်။"
"(မသိချင်ယောင်ဆောင်လျက်) အဲ . . ဟုတ်ပြီလေ။ အဲဒါ အသင်တို့နဲ့ မည်သို့မည်ပုံ ပတ်သက်နေလို့လဲ။"
"သက်ဆိုင်တာပေါ့ အရှင်။ ဒါဟာ အကျွန်တို့နဲ့ တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်လာတော့မယ်ဟာမို့ အကျွန်တို့ အထပ်တိုင်း အထပ်တိုင်းမှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေစုဝေး တိုင်ပင်ပြီး အရှင့်ဆီမှာ အရေးဆိုဖို့ ဆုံးဖြတ်လို့ အခု အရှင်မေးနေတာ အဲဒီအကြောင်းတွေပေါ့။"
"အကျွန်တို့ တိုင်ပင်ပြီး တောင်းဆိုချက်များကို ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အရှင် အဆောတလျင် အရေးယူပေးပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။"
"ကဲ . . ကဲ . . ဖတ်ပြစမ်းပါအုံး။"
အကျွန်တို့ ငရဲသူ ငရဲသားများ အများစုဆန္ဒဖြင့် ဆုံးဖြတ်ထားသော ကြေညာချက်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။
"ငရဲသူ၊ ငရဲသားများ၏ ကြေညာချက်"
လူ့ပြည်လူ့ရွာရှိ ဗုဒ္ဓရှင်တော်၏ ဘာသာ၊ သာသနာ ထွန်းကားရာ၊ စည်ပင်ရာ၊ စောင့်ရှောက်ရာတို့၏ အခြေခံဖြစ်တော်မူသော တိုင်းဌာနီ ဗမာပြည် တွင် ဘုရားမရှိ၊ တရားမသိ၊ သံဃာမလေးတဲ့ သာသနာဖျက်များ သောင်းကျန်းမင်းမူလျက်ရှိရာ ၎င်းတို့၏ လားရာပကတိကား အကျွန်တို့၏ ငရဲဘုံသို့ပင် ဦးတည်လျက်ရှိပေသည်။
၁။ ထိုသူတို့ကား နအဖ စစ်အုပ်စုများ၊ အလိုတော်ရိ အပေါင်းအပါများ၊ ကြံ့ဖွတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ စွမ်းအားရှင်ဆိုသူများပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသို့သော အနှီပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အဘယ်အတွက်ကြောင့် အသင်မင်းကြီးမှ အပြစ်မယူ လူ့ပြည်လူ့ရွာတွင် ဆက်လက်ထားရှိရပါသလဲ ဆိုတာကို အမြန်ဆုံး ဖြေရှင်းချက် ပေးရန်။
၂။ ထိုသူတို့မှာ လားရာအမှန်ကား မဟာအ၀ီစိ ငရဲပင်ဖြစ်၍ ပြုခဲ့သော အကုသိုလ်ကံအလိုက် အထပ်ထပ်တိုင်းတွင် ၀ဋ်ကြွေး ပေးဆပ်နေရသော (အထူးသဖြင့် မဟာအ၀ီစိငရဲမှ) အကျွန်တို့မှ ၎င်းတို့ရောက်လာပါက မည်သို့မျှ လက်ခံနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။ ၎င်းတို့အား အကျွန်တို့နှင့် တတန်းတစားတည်း သတ်မှတ်၍ ထားရှိမည်ကို မည်သို့မျှ လက်ခံနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိပေး အကြောင်းကြားလိုက်သည်။
၃။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အသင်မင်းကြီးမှ သက်ဆိုင်သောသူများနှင့် တိုင်ပင်၍ အထပ်သစ်များ ထပ်မံဖွင့်လှစ်ရန် (သို့မဟုတ်) ငရဲဘုံတွင် လက်မခံဘဲ ဘုံအသစ်တစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရန် ကြိုတင်စီစဉ်ထားပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါသည်။
"အိမ်း . . . ငါလည်း သက်ဆိုင်ရာတွေနဲ့ ညှိနှိုင်းနေတာပဲ မောင်မင်း ဒေ၀ဒတ် . . . ။ ကံငါးပါးထိုက်လို့ ရောက်လာတဲ့ မင်းတို့လို တစ်ယောက်စီ၊ တစ်ယောက်စီ ရောက်လာတာက ငါ့အတွက် အပန်းမကြီးဘူးကွ။ အခုဟာက တပြုံတမကြီး လာမှာဆိုတော့ ငါလည်း ခေါင်းစားတယ်ကွာ။ အားလုံးနဲ့တော့ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်နေတာပဲကွ။ လတ်တလောတော့ အထပ်တွေ တိုးချဲ့ဆောက်နေတာပဲ။" (ဤသတင်းဆောင်းပါးကို ဤနေရာ နှင့် ဤနေရာ များတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။)
"ဒါပဲနော် မင်းကြီး။ အကျွန်တို့ကို ချွေးသိပ်ဖို့တော့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ အကျွန်တို့က အားလုံးသေချာတိုင်ပင်ပြီးမှ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်လိုက်တာပဲ။ အကျွန်က မှားခဲ့မိလို့ ပြစ်ဒဏ်ခံရတာ။ အကျွန်က ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်သိလို့ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကို လက်အုပ်ချီမိုး ကန်တော့တောင်းပန်ခဲ့သေးတယ်။ အကျွန်က ကိုယ့်အမှား ကိုယ်သိခဲ့သေးတယ်။ စော်ကားမိခဲ့တဲ့ ၀ဋ်ကြွေးတွေကို အခု ပြန်ဆပ်နေရတာ။ သူတို့က ငရဲကျရင်တောင် တောင်းပန်ကန်တော့မယ့် လူစားမျိုးတွေ၊ နောင်တရမယ့် လူစားမျိုးတွေ မဟုတ်ဘူး။"
"ဒါနဲ့ အကျွန်တို့ အချက် (၁) မှာ တောင်းဆိုထားတဲ့ ဖြေရှင်းချက်ပေးရန်ကို အရှင်မင်းကြီး ဘယ်လို ရှင်းပေးမှာလဲ။ ဘာကြောင့်မို့လို့ သူတို့တွေကို အရေးမယူသေးဘဲ ထားရတာလဲ။"
"ဟဲ့ အသင် ငမိုက်သားတို့ရဲ့ ဟိုမှာက ၁၉ နှစ်ကျော် ခံလာရလို့ ခံနိုင်ရည်ရှိနေသေးတယ်ကွ။ မင်းတို့ပဲ အခုတောင် လာတော့မယ့် အသံလေး ကြားတာတောင် တခါမှ ငါ့ရာဇ၀င်မှာ မရှိဘူးတဲ့ ဆန္ဒပြတယ်လေးနဲ့ ဟိုဟာ တောင်းဆို၊ ဒီဟာ တောင်းဆိုနဲ့။ ငါက ဒါတွေ ကြိုမြင်လို့ ပြင်ဆင်နေတာကွ။"
"အရှင် အခုလို အချိန်ဆွဲနေလို့ အခုဆို ဘာမှန်းညာမှန်းမသိဘဲ ကံငါးပါးထိုက်မယ့်သူတွေ အများကြီးပါလာပြီ။ တကယ်တမ်း ပြောကြေးဆို အရှင့် ပယောဂတောင် မကင်းဘူး။"
"အံမယ်။ မင်းတို့က ငါ့ကိုတောင် ဆွဲထည့်နေပြန်ပြီ။ မင်းတို့လည်း ကြားဖူးသားနဲ့။ ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ ကိုယ့်ထံပြန်လာမည် ဆိုတာလေ။ ဘယ်သူမပြု မိမိမှုပဲကွ။"
"အိမ်း . . မင်းတို့လည်း အေးအေးဆေးဆေး ကိုယ့်ဝဋ်ကြွေး ကိုယ်ကျေအောင် ပြန်ဆပ်ကြတော့။ ငါ့မှာ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ခေါင်းစားနေလို့ တစ်ရက်မှ ကောင်းကောင်းမအိပ်ရသေးဘူး။ လောကနိယာမကို ဘယ်သူမှ မလွန်ဆန်နိုင်ပါဘူး။"
Posted by freeburma at 6:21 AM 1 comments
Posted by freeburma at 7:00 PM0comments
ဧရာဝတီ | စက်တင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၀၇
ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့တွင် နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲက သံဃာအပါး ၂၀၀ ကျော် ဦးဆောင်ဆန္ဒပြရာ ရာပေါင်း များစွာသော ပြည်သူများလိုက်ပါခဲ့သည်ဟု မျက်မြင်သက်သေတဦးက ဧရာဝတီကိုပြောသည်။ အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲကို အာဏာပိုင်တို့က မျက်ရည်ယိုဗုံးများသုံးကာ ဖြိုခွဲသည်ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်သစ်တွင် သံယာတော်အများ၏ ဆန္ဒကောက်ခံပြီး ကျောင်းအတွင်းရှိ သိမ်ထဲ၌ သံဃာ အပါး ၂၀ ခန့် ယနေ့ ကံဆောင်သည် ဟုသိရသည်။
“တခြားကျောင်းတော့မသိဘူး ... တို့ကျောင်းတော့ ကျောင်းထဲက သိမ်မှာပဲ ကံဆောင်ခဲ့ကြတယ်၊ သံဃာတော်တွေရဲ့ ဆန္ဒကို ခံယူတယ်´ဟု မစိုးရိမ်တိုက်သစ်က ဆရာတော် ဦးက၀ိန္ဒက ပြောသည်။
“ကျောင်းဝင်းအပြင်ဘက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေမှာ ကြံ့ခိုင်ရေးတွေ ၁၀ ယောက် နီးပါးလောက် စောင့်ကြည့်နေတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ထပ်မံပြောသည်။
မစိုးရိမ် စာသင်တိုက်သစ် အပြင်ဘက်တွင် ကြံ့ဖွံ့၊ ဆွမ်းအားရှင်၊ စစ်တပ် စသည်တို့ သည် ယနေ့ နံနက်လင်းကတည်းက ရောက်နေခဲ့သည် ဟုလည်း သိရသည်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့်မှစ၍ ပဲခူးမြို့ဘုန်းကြီးကျောင်းများရှိ သံဃာတော်အပါး ၁၅၀၀ ခန့် ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့် ပဲခူးမြို့တွင်းမှ ရွေမော်ဓော ဘုရားသို့ မေတ္တာသုတ်နှင့် ပရိတ်ရွတ်ကာ ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်ဟု မျက်မြင်တဦးက ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသော ပြည်သူလူထုကြီးကလည်း သံဃာတော်များနောက်သို့ လိုက်ပါအားပေးကြပြီး ရေသန့်များ ကပ်လှူကာ အားပေးထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
သံဃာတော်များသည် ၎င်းတို့ဆန္ဒပြပွဲအား ဓာတ်ပုံမရိုက်ရန် ဟန့်တားထားသည့် ဆိုင်းဘုတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး အာဏာပိုင်ဘက်မှဟု ယူဆရသော ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနေသူ နှစ်ယောက်ထံမှ ကင်မရာကို သိမ်းယူလိုက်ကြောင်းလည်း မျက်မြင်သက်သေက ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်များက ဆန္ဒပြသံဃာတော်များကို ဖြိုခွင်းခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင် ယခင်ရက်များက ဆန္ဒပြပွဲမစခင်က တုတ်၊ လေးခွများ ကိုင်ဆောင်ထားသည့် အာဏာပိုင်နှင့် ၎င်းတို့၏ အဖွဲ့သားများကို ယနေ့တဦးတယောက်မှ မတွေ့ရတော့ ကြောင်းလည်း သိရသည်။
သံဃာတော်များ ဆန္ဒပြအပြီးတွင် ပဲခူးမြို့လုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိပြီး ဈေးဆိုင်များလည်း ပိတ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီခွဲခန့်တွင် ခေမာသီဝံစာသင်တိုက်၊ သုခ၀တီစာသင်တိုက်၊ စိတ္တပါလဂူကျောင်းစာသင်တိုက် စသည့် စာသင်တိုက်ကြီးများ အပါအ၀င် အခြားရဟန်းအနည်းငယ်ဆီရှိသည့် ကျောင်းငယ်များရှိ သံဃာတော်များ သိမ်ဝင်ကြပြီး ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကမ္မ၀ါဖတ်ကာ ကံဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း ခေမာသီဝံစာသင်တိုက်ရှိ စာချဆရာတော်တဦးက ပြောဆိုသည်။
“ဦးပဉ္ဇင်းတို့ ကံဆောင်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့မှာရှိတဲ့ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ သာရေး၊ နာရေး၊ ဆွမ်း၊ ကွမ်း အားလုံးကို ဖြတ်လိုက်တာပါ။ ဘယ် သာရေး နာရေးမှ မလိုက်တော့ပါဘူး ဒကာရေ ...”ဟု စာချဆရာတော်က ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက သံဃာတော်များအား မတောင်းပန်သည့် ကာလပတ်လုံးအား ကံဆောင်သည့် သပိတ်မှောက်ကာလဟု သတ်မှတ်ထားကြောင်းလည်း ပြောသည်။
နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲခန့်တွင် အောင်မြေရတနာစာသင်တိုက်မှ သံဃာအပါးတရာခန့် စေတီကြီးဘုရားမှစ၍ ပုခုက္ကူမြို့ကို စီတန်းလှည့်လည် ပရိတ်ရွတ်ကြကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ဆူးလေဘုရားသို့ချီတက်သည့် ဆန္ဒပြသံဃာများ ဆူးလေရောက်သည့်အချိန်၌ သံဃာအပါး ၆၀၀ ကျော်လာသည်ဟု မျက်မြင်သက်သေက ပြောသည်။
သံဃာတော်များ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုကာ ချီတက်ကြခြင်းဖြစ်ပြီး ဆူးလေဘုရားမှ ဗိုလ်တထောင်ဘုရားသို့ ဆက်လက် ချီတက်ရာ ထောင်နှင့်ချီသောပြည်သူလူထုများက လက်ခုပ်တီးအားပေးကြကြောင်း သိရသည်။
နေ့လယ်တစ်နာရီ မှစတင်၍ှ ပခုက္ကူ မြို့  မှ ရဟန်းပျို တထောင်နှီးပါးခန့် အနောက်တိုက်၊ အလယ်တိုက်၊ အရှေ့တိုက် ဗောတိမာန်တိုင်ကျောင်းများမှတဆင့် မြို့ပတ်၍ မေတ္တာသုတ်ရွတ်ကာ ဆန္ဒပြ လမ်းလျှောက် သည်ဟု ပခုက္ကူရှိ ဘုန်းတော်ကြီးတပါးက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြသံဃာများသည် ဘုရားကြီး၊ ၎င်းမှတဆင့် သီဟိုဠ်ရှင်ဘုရားသို့ ဆက်လက်ချီတက်ရန် အစီအစဉ်ရှိသည်ဟု အဆိုပါဘုန်းတော်ကြီးက ပြောသည်။
“လေးပါးတတွဲ၊ သုံးပါးတတွဲလောက် အေးအေးချမ်းချမ်း မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆို လျောက်ကြပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေ အနေနဲ့ကတော့ လူမပါ သေးလို့ဘာမှ အနှောင့်အယှက်မပေးသေးဘူး” ဟုလည်း ပခုက္ကူရှိ မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။
ရွှေတိဂုံဘုရားကို အာဏာပိုင်တို့ကပိတ်ထားသောကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ အသံအပါး ၃၀၀ ခန့် နေ့လယ်၂ နာရီတွင် ရွှေတိဂုံခြေရင်း ဗဟန်းတောရမှ ဆူးလေဘုရာသို့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြနေကြကြောင်း မျက်မြင်သက်သေ တဦးက ပြောသည်။
သံဃာများကို အာဏာပိုင်တို့က နှောင့်ယှက်ခြင်းမရှိသော်လည်း အနောက်မှ ကားများဖြင့် လိုက်ကြည့်နေသည် ဟုလည်း အဆိုပါမျက်မြင်သက်သေက ပြောသည်။
နေ့လယ် ၂ နာရီခွဲတွင် ဆန္ဒပြသံဃာများ သမတရုပ်ရှင်ရုံအနီးသို့ရောက်ရှိကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
နံနက် ၅ နာရီခန့်က အောင်လံမြို့တွင် သံဃာအပါး ၉၀ ကျော်မေတ္တာသုတ်ရွတ်ဆိုကာ မြို့ပတ်ဆန္ဒပြကြောင်း မျက်မြင်သက်သေတဦးက ပြောသည်။
“ရှေ့ကနေ သံဃာတပါးကနေဦးဆောင်ပြီး သပိတ်ကိုမှောက်ပြီးပိုက်ထားတယ်။ နောက်လိုက်သံဃာက ၃ ပါးကို တတန်း၊ ၃၁ တန်းရှိတယ်။ နောက်ကနေတပါးကပိတ်ပြီး မေတ္တာသုတ်ရွတ် လျှောက်ကြတာ” ဟု မျက်မြင်သက်သေက ပြောသည်။
အာဏာပိုင်တို့က သံဃာများနောက်မှ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များဖြင့် လိုက်လံစောင့်ကြည့်သည်ဟုလည်း အဆိုပါ မျက်မြင်သက်သေက ပြောသည်။
လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သည့် တ၀တိံသာကျောင်းတိုက်ရှိ ဦးပဉ္ဇင်းတပါးက “ကံဆောင်တယ်ဆိုတာ သိမ်ထဲဝင်ပြီး ကံဆောင်မှမဟုတ်ပါဘူး။ သံဃာတော်တွေက ကံဆောင်လိုက်တယ်ဆိုလို့ ဦးပဉ္ဇင်းတို့က မေတ္တာပို့ပြီး ထောက်ခံလိုက်တယ်၊ ကံဆောင်တာက သဘောတူတယ်ဆိုရင်လည်း ကံမြောက်သွားတာပါပဲ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
အောင်လံသံဃာတော်များ၏ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြပွဲအား မြို့နယ်သံဃနာယကအဖွဲ့ကလည်း ထောက်ခံကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်။
ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ ကိုးထပ်ကြီး - ရန်ကုန်
ယနေ့ နံနက်ပိုင်း မှ စတင်၍ ရန်ကုန်မြို့ စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဗားဂရာတိုက်တွင် သိမ်ထဲ၌ သံဃာများ ကံဆောင်ကြောင်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ငါးထပ်ကြီးဘုရား၊ ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရားနှင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကိုးထပ်ကြီး ဘုရားတို့တွင် စစ်တပ်က လက်နက်အပြည့်အစုံဖြင့် လုံခြုံရေးယူထားကြောင်း ကိုးထပ်ကြီးဘုရားမှ ဆရာတော် တပါးက ပြောသည်။
“ဗားဂရာတိုက်က ကံဆောင်တာပြီးသွားပြီ၊ သူတို့ဘယ်သိလိုက်မလဲ သိမ်ထဲလုပ်တာ၊ ခုနကတော့ ဗိုလ်မှူးတွေ လာလျှောက် တယ်၊ စစ်တပ်က လုံခြုံရေးယူထားတယ်တဲ့၊ သံဃာတွေကို ထိမ်းပေးပါတဲ့၊ ထိမ်းဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူး ထင်တယ်”ဟု သက်တော် ၇၂ နှစ်ရှိ အထက်ပါ ကိုးထပ်ကြီးဘုရား ဆရာတော်က ပြောသည်။
ကျောင်းတိုက်ချင်းဆက်သွယ်သည့် တယ်လီဖုန်းလိုင်းတချို့ကို ပိတ်ထားသည်ဟုလည်း ယင်း ဆရာတော်က ဆိုသည်။
“ဗဟန်းကိုခေါ်တာမရဘူး၊ လမ်းမတော် သရက်တော ကျောင်းဘက် ခေါ်တာလည်း မရဘူး၊ ဖုန်းတွေပိတ်ထားတယ်”ဟု ကိုးထပ်ကြီးဆရာတော်က ပြောသည်။
ယင်းကိုးထပ်ကြီးဘုရား၊ ငါးထပ်ကြီးဘုရားနှင့် ခြောက်ထပ်ကြီးဘုရား ၀န်းကျင်တွင် စစ်တပ်အပြင် ကြံ့ဖွံ့များ၊ မီးသတ်ကား များနှင့်ပါ လုံခြုံရေးယူထားပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးကျောင်းများဝန်းကျင်တွင် လုံခြုံရေးများ ချထားကြောင်း သိရသည်။
နံနက် ၃ နာရီမှစ၍ ကျိုက္ကဆံဘုရားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ စာသင်တိုက်များမှ သံဃာ ၃၅ ပါးခန့်က တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ရပ်ကွက်အချို့တွင် ပရိတ်ရွတ်ကာ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြကြကြောင်း တောင်ဥက္ကလာပမှ သံဃာတပါးက ပြောသည်။
“စာသင်သားကိုယ်တော်လေးတွေ တောင်ဥက္ကလာ ၁၃ ရပ်ကွက်၊ ၁၀ ရပ်ကွက်၊ ၁၁ ရပ်ကွက် တွေကိုပတ်ပြီးတော့ ပရိတ်ရွတ်ကြတယ်။ ၄ နာရီခွဲလောက်မှာ ကျောင်းပြန်ရောက်ကြတယ်။ အနှောင့်အယှက်ကတော့ မရှိသေးဘူး” ဟု အဆိုပါ သံဃာက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့်လကုန်ပိုင်းကစ၍ ရန်ကုန်မြို့၏လုံခြုံရေးကို တပ်မမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး တင့်ဝေဦးဆောင်သည့် စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှု ဌာနချုပ် အမှတ် ၄ တပ်က တာဝန်ယူထားပြီး မြို့အနှံ့ အရပ်ဝတ်များဖြင့် အစောင့်ချထားသည်ဟု စစ်တပ်အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
နံနက် ၈ နာရီမှ ၉ နာရီအထိ စိတ္တပါလဂူကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာအပါးတရာကျော် ပရိတ်ရွတ်ကာ လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြကြောင်း သိရသည်။
ခေမာသီဝံစာသင်တိုက်မှ စာချဆရာတော်တပါးက “သံဃာတွေက သပိတ်ကိုမှောက်ပိုက်ပြီး မြို့ထဲလှည့်တယ်လို့ကြားတယ် ဒကာကြီး …။ အနှောင့်အယှက်တော့ မရှိသေးပါဘူး၊ နောက်ကနေ နောက်ယောင်ခံလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ”ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
နေ့လယ် ၁၂ နာရီခန့်တွင် ခေမာသီဝံစာသင်တိုက်နှင့် အခြားစာသင်တိုက်တခုတို့မှ သံဃာအပါး ၅၀၀ ကျော်တို့ မိမိတို့ ကျောင်းတိုက်များတွင် ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကံဆောင်ပွဲကိုစတင်မည်ဟု အဆိုပါ စာချဆရာတော်က ပြောသည်။
“ဦးပဉ္ဇင်းတို့ လောလောဆယ်စုစည်းထားတာက စာသင်တိုက်ကြီး ၂ တိုက်ပေါ့။ ကျောင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ သံဃာတွေ သိမ်ထဲမှာ ပတ္တနိက္ကုဇ္ဇန ကမ္မ၀ါဖတ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
Posted by freeburma at 8:17 PM0comments
Posted by freeburma at 11:48 AM0comments
(ဤအကြောင်းအရာများကို ကိုနေလင်း (အ.က.သ) ရေးသားပြုစုထားသော လူရှင်သင်္ချိုင်းများအကြောင်း စာစုမှ ကောက်နှုတ် တင်ပြထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံနိုင်ခြင်းအတွက် ကိုနေလင်းမှ နားလည်ခွင့်ပြုနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည် မျှော်လင့်ပါသည်။ အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက် ရဟန်းသံဃာများမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက် ကာကွယ်ခြင်း၊ တာဝန် ရဲရဲယူ၍ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် တထောင့်တနေရာ တခန်းတကဏ္ဍ သာသနာ့ဝန် ထမ်းဆောင်ကြခြင်းများကို ပြည်သူအများ ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ရှုမြင်သုံးသပ်နိုင်၍ သာဓုခေါ်ဆိုနိုင်စိမ့်သောငှာ ရည်ရွယ်ရင်းဖြစ်သည်။)
ကျနော် အင်းစိန်ထောင်မှာ နေခဲ့ရတုန်းက န၀တက သံဃာတော်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘာသာရေး နှိပ်ကွပ်မှုတွေ၊ သာသနာတော် စော်ကားမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တာကို အကျယ်တ၀င့် ရှင်းပြချင်တာကြောင့် အခုလို သီးသန့် ဖော်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ပြဿနာတက်တဲ့သူတွေကတော့ တိုက်ထဲမှာနေရတဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမတ်တွေဟာ နိုဗယ်လ်ဆုရရှိလို့ ၀မ်းသာတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ထောင်ဝင်စာကနေ ကွတ်တီမုန့်ပေါ်မှာ “N" အမှတ်အသားပါတဲ့ မုန့်တွေကိုသွင်းပြီး ထောင်ထဲမှာ နိုဗယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆု အထိမ်းအမှတ် ဝေငှကြပါတယ်။ အဲဒီလို “N" တံဆိyfပါတဲ့ မုန့်တွေဝေငှနေတာကို ထောင်အာဏာပိုင်တွေက သိသွားကြပြီး ထောင်ဝင်စာပါ “N" တံဆိပ်ပါမုန့်တွေကို သိမ်းဆည်းဖို့ အမိန့်ထုတ်လိုက်ပြီး ရေချိုး၊ မိလ္လာချခွင့် ( ၃ )ရက် ပိတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ နောက်ဆက်တွဲ တိုက်ပိတ် (၃) ရက်ပါ ပူးတွဲဆုရသွားတဲ့ ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်။
“သင်္ကန်းဝတ်တွေ သံဃာအတုအယောင်တွေ”လို့ ယုတ်မာကောက်ကျစ်စွာ စွပ်စွဲထားတာ ဖြစ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေကို လူဝတ်လဲထားတာကို ရင်နင့်ဖွယ် တွေ့ရပါတယ်။ ဆရာတော်တွေဟာ သက်တော်အားဖြင့် (၆၀)၀န်းကျင်ခန့် ရှိကြပြီး ကြည်ညိုဖွယ် ကောင်းတဲ့ ဥပဓိရုပ်ပိုင်ရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။
ထောင်မှူးက လိုအပ်တဲ့ ထောင်ကျစာရင်းတွေ သွင်းပြီး ထောင်တွင်းနေထိုင်မှု စည်းကမ်းတွေ ညွှန်ကြားပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ စည်းကမ်းထိန်းလို့ခေါ်တဲ့ ထောင်ကျအကျဉ်းသား အရာရှိ သန်းအောင်က ထောင်မှူးလာတဲ့အခါ၊ ထောင်ပိုင်လာတဲ့အခါ ထိုင်ရမယ့် ပုံစံနည်းတွေကို သင်ကြားပါတော့တယ်။ ပြီးတော့မှထောင်ထဲကို လူသစ်ရောက်ရင် မောင်းတဲ့ပုံစံအတိုင်း ဆရာတော်တွေကို ကြိမ်းမောင်းပါတယ်။
“ ခင်ဗျားတို့ ထောင်အပြင်မှာ ဘာကောင်ကြီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ အားလုံးကို ထောင်ဗူးဝမှာ ချိတ်ထားခဲ့။ ထောင်ထဲမှာ ဘုန်းကြီး၊ သံဃာဆိုတာမရှိဘူး။ နာမည်ခေါ်ရင် လူနာမည်ပဲခေါ်၊ ပြော။ ထမင်းတစ်နပ်စားတာတွေ၊ (၂)နပ်စားတာတွေ မလိုချင်ဘူး။ ရှုပ်ရှုပ်ယှက်ယှက်လုပ်တာ မကြိုက်ဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ကတုံးမတုံးရဘူး။ ဒီစည်းကမ်းတွေ မလိုက်နာရင်တော့ ခင်ဗျားတို့ကျောပေါ် တုတ်ရောက်ပြီသာမှတ်၊ သန်းအောင် ဘာလည်းဆိုတာ သိချင်ရင် စမ်းကြည့်စမ်း ”
သံဃာတော်တွေကို ယုတ်ယုတ်မာမာစကားလုံးတွေနဲ့ ဟိန်းဟောက်ပြီး န၀တကပေးတဲ့ အာဏာကို အသုံးချပါတယ်။ ပုံစံထိုင်တာတွေ ပြီးတဲ့အခါမှာ ဆရာတော်တို့ကို ကျနော်တို့ အဆောင်က အိပ်ခန်း(၂)မှာ နေရာချပါတယ်။ ဆရာတော်တွေဟာ ထောင်ထဲမှာ န၀တရဲ့ ယုတ်မာမှုကြောင့် လူဝတ်လဲခံထားရပေမယ့် ရဟန်းတို့စောင့်ထိန်းအပ်တဲ့ ၀ိနည်း၊ သိဏ္ခာတော်တွေကို ဆက်လက်စောင့်ဆည်း ထိန်းသိမ်းကြပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဆရာတော်ကြီးတွေကို န၀တက ထောင်ချအရေးယူခဲ့တာနဲ့ ပက်သက်ပြီး မေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာ အဖြစ်မှန်ကို သိလိုက်ရပါတယ်။
ဆရာတော် (၃)ပါးအနက် (၂)ပါးက ရန်ကုန်တိုင်း သာကေတမြို့နယ် မဟာဗောဓိ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က စာချဆရာတော်တွေ ဖြစ်ကြပြီး ကျန်ဆရာတော်တပါးက ရန်ကုန်တိုင်း အင်းစိန်မြို့နယ် ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က တိုက်အုပ်ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသ ဆရာတော်ဘုရားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်တို့ရဲ့ အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပုံအကြောင်းကို ပြောပြရရင် မန္တလေးမြို့ကနေ စတင်ပြီး ပြောရပါလိမ့်မယ်။
အဲဒီလို မပြုလုပ်ဖို့အတွက် ဆွမ်းခံထွက်လာတဲ့ သံဃာတော်တွေက တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာ စစ်သားတွေက သံဃာတော် တွေကို ဆောင့်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သတိပေးမှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိပဲ ပစ်ခတ်လိုက်ပါတယ်။ တစ်ခဏအတွင်းမှာပဲ (၈၄)လမ်းမကြီး တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက် သွားပါတယ်။
လမ်းမထက်ပေါ်မှာ ယမ်းငွေ့တွေကြောင့် သပိတ်တွေ လွင့်ကျ၊ ဆွမ်းတွေပြန့်ကြဲ၊ လဲပြိုနေတဲ့ ရဟန်းတွေ ဒဏ်ရာရသွားတဲ့ အချို့ရဟန်း သံဃာတွေကို အိမ်တွေအချို့က ကူညီပြုစုကြပါတယ်။ ကျောင်းသားတွေက ဆရာတော်အချို့ကို ဆေးရုံကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ စစ်တပ်ကလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိသွားတဲ့ သံဃာအချို့ကို စစ်ကားပေါ် တင်ဆောင်သွားပါတယ်။
မကြာမီ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သွေးစွန်းသွားတ (၈၄)လမ်းမကြီးပေါ်ကို မီးသတ်ကားတွေနဲ့ ဆေးကြောပါတော့တယ်။ အဲဒီဖြစ်ပွားတဲ့ညပဲ မန္တလေးတိုင်းမှူးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်က ပြောကြားတဲ့အခါမှာ ရဟန်းသံဃာတော်တစ်ပါးမှ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ဖြစ်မှု မရှိဘူးလို့ ပြောဆိုသွားပါတယ်။ တိကျခိုင်လုံတဲ့ အချက်အလက်တွေ ရရှိနိုင်ဖို့အတွက် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (ဗကသ) နဲ့ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လူငယ်သမဂ္ဂ (ဗကလ)တို့ ပူးပေါင်းပြီး စုံစမ်းမှုအဖွဲ့ကို မန္တလေးမြို့မှာ ဖွဲ့လိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ မန္တလေး ဘုရားကြီးကျောင်းတိုက်မှာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာ သိရှိရတာကတော့ ထီးလင်းကျောင်းတိုက်က ကိုရင်တစ်ပါး ဒဏ်ရာပြင်းပြင်းထန်ထန် ရရှိသွားတာကြောင့် မန္တလေးဆေးရုံကြီးကို ပို့လိုက်ရပါတယ်။ သံဃာတော်တွေက စောင့်ရှောက်နေစဉ် အခြေအနေ ဆိုးရွားလာတာကြောင့် စစ်တပ်က စစ်ဆေးရုံမှာ ကုသဖို့ လိုတယ်လို့ပြောပြီး ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သည်မှာ ယနေ့တိုင် ကိုရင်လေးသတင်းမှာ ပျောက်ကွယ်နေပါတယ်။ ကျနော့်ကို မန္တလေးမြို့ လေးပြင်လေးရပ် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်က ဆရာတော် ဦးရေ၀တက ပြောပြရာတွင် အဲဒီအရေးအခင်း ဖြစ်ပွားရာတွင် ရဟန်းများ ပျံလွန်တော်မူတာတွေ အများအပြားရှိကြောင်း၊ ဒဏ်ရာရတဲ့ ရဟန်းသံဃာတော်တွေလည်း အများကြီးရှိကြောင်း၊ စစ်တပ်က လူကို သေစေနိုင်တဲ့အထိ ရည်ရွယ်ပစ်ခတ်တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သာဓကအနေနဲ့ ကျည်ဆံထိမှန်ထားတဲ့ သပိတ်၊ သင်္ကန်းနဲ့ သွေးစွန်းနေတဲ့ သင်္ကန်းတွေ ရှိကြောင်း၊ သပိတ်ကို ရဟန်းများက ရင်မှာပိုက်ပြီး ဆွမ်းခံထွက်တာမို့ သပိတ်ကို ကျည်ဆံထိမှန်တာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူကို ချိန်ရွယ်ပစ်ခတ်တာဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို စော်ကားတာဖြစ်ကြောင်း ဆရာတော်က ရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်။
အဲဒီင်္အမှုအခင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျခိုင်မာတဲ့ အချက်အလက်တွေ စုဆောင်းမိချိန်မှာတော့ ပရိတ္တိသာသနာထွန်းကားတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအပြည့်ရှိတဲ့ မန္တလေးမြို့မှာ သံဃာတော်တွေ အားလုံးစုရုံးပြီး သံဃာတော်တွေ၊ ရဟန်းတွေကို သတ်ဖြတ်တဲ့၊ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို စော်ကားဖျက်ဆီးတဲ့ စစ်တပ်နဲ့ အပေါင်းအပါတွေကို ဘာသာရေးအရ ဒဏ်ခတ်တဲ့အနေနဲ့ စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အပေါင်းအပါ၊ ဆွေမျိုးတွေ၊ အသိုင်းအ၀ိုင်းတွေက ကပ်လှူတဲ့ကိစ္စ အမှုအစုစုကို လက်မခံခြင်း၊ သာရေး၊ နာရေး ပင့်ဖိတ်တာတွေကို လက်မခံတော့ခြင်းဖြင့် န၀တကို သပိတ်မှောက်ဖို့ စတင်ပါတော့တယ်။
န၀တနဲ့ ဘာသာရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုလုပ်တော့ပဲ ဘာသာရေးအရ ဒဏ်ခတ် သပိတ်မှောက်တဲ့ “ပတ္တနိကုဇ္ဖန ကံဆောင်ခြင်း”အမှုကို ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ မန္တလေးမြို့ လေးပြင်းလေးရပ် သံဃာ့သမဂ္ဂီအဖွဲ့ချုပ်က ဦးဆောင်ဆင်နွှဲတဲ့ သပိတ်မှောက် ကံဆောင်ခြင်းဟာ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ အခြားမြို့ကြီးတွေကို တမုဟုတ်ချင်း ကူးစက်ပျံ့နှံ့ သွားပါတော့တယ်။
မန္တလေးမြို့ကနေ ကူးစက်ပျံ့နှံ့သွားတဲ့ ကံဆောင်သပိတ်ပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်မြို့က ရဟန်းရှင်လူ၊ ပြည်သူလူထုအကြား နာမည်ကြီးတဲ့ ဆရာတော်(၂)ပါးကို န၀တက ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကံဆောင်သပိတ် ဦးဆောင်ဆင်နွှဲတယ်လို့ န၀တက စွပ်စွဲလိုက်တဲ့ ဆရာတော်(၂)ပါးကတော့ ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းမှာ တည်ရှိတဲ့ မဟာဂန္ဓာရုံ ကျောင်းတိုက်က တိပိဋကဓရဘွဲ့ရ တိုက်အုပ်စာချဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလလင်္ကာရနဲ့ နောက်ဆရာတော်တစ်ပါးကတော့ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် က တိုက်အုပ်စာချ ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသ တို့ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပိဋိကတ်သုံးပုံ ရေးဖြေ၊ နှုတ်ဖြေ အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်(၅)ပါး ပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အနက် ဆရာတော် ဦးသုမင်္ဂလာလင်္ကာရဟာ တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ပိဋိကတ်(၃)ပုံ အာဂုံဆောင်ဖြေဆိုခြင်းကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၃၅ခုနှစ်မှာ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ အသက်အငယ်ဆုံး သံဃာတစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ စာတတ်၊ ပေတတ် ပညာတတ်တစ်ပါး ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓစာပေ သင်ကြားပို့ချမှု၊ စာသင်ကျောင်းတိုက်တွင် အုပ်ချုပ်မှု ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပတဲ့ အကြီးတန်း၊ အငယ်တန်း၊ အလတ်တန်း သံဃာ့စာမေးပွဲတွေမှာ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်က သံဃာအများ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ကြပြီး ပထမကျော်ကို တစ်တန်းမဟုတ် တစ်တန်းတွင် ရရှိတတ်ပါသေးတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ ဂုဏ်သတင်းကြောင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ မသိသူရှားလှပြီး ပြည်သူအများရဲ့ ကြည်ညိုမှုကိုလည်း ရနေတဲ့ ဆရာတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့ ပရိယတ္တစာပေပညာရပ်တွေကို သာသနာတော်ကြီး ပြန့်ပွားစည်ဝေအောင် အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတဲ့ ဆရာတော်ကြီး အား ဘာသာရေးအရ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှုတွင် ပါဝင်သည်ဆိုကာ ဆရာတော်ကို န၀တမှ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်ရဲ့ ဆန္ဒမပါပဲ ဆရာတော်ကို အတင်းအဓမ္မ လူဝတ်လဲကာ သင်္ကန်းကို ဆွဲချွတ်ပါတယ်။ လက်မကို လက်ထိပ်ခတ်ပြီး မြန်မာပြည်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းစွန်းက ဝေးလံခေါင်သီပြီး လူသူအရောက်အပေါက်နည်းတဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မချမ်းဘောသို့ လေယာဉ်ပျံနဲ့ တင်ဆောင်ကာ ဆရာတော်ကို ထောင်ချလိုက်ပါတယ်။
ဆရာတော် ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သတင်းကို ကြားသိကြတဲ့ ပရိသတ်တို့က လာရောက်ဖူးမျှော်ကြပြီး ဆရာတော်ကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့ကိစ္စအပေါ် မကျေနပ်မှုတွေ ပေါက်ကွဲထွက်လာကြမှာကို န၀တက အကြီးအကျယ် စိုးရိမ်သွားတာကြောင့် ဆရာတော်ကို တရားရုံးမထုတ်ပဲ မျက်ကွယ်ရမန် ယူစေခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ရုံးထုတ် တရားရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုပြီး ကြားရတဲ့နေ့တွေမှာ ရန်ကုန်မြို့က ဘားလမ်း (စတီးဝပ်) အချုပ်ခန်းကို လူတွေအများအပြား လာရောက်စောင့်ကြည့်ကြပြီး အဲဒီထဲမှာ န၀တ၊ မဆလ အရာရှိတွေရဲ့ ဆွေမျိုး အသိုင်းအ၀ိုင်းက လူတွေကလည်း ပါဝင်ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆရာတော်ကို ရဟန်းအကြား၊ ပြည်သူအကြား မဟုတ်မမှန်သတင်းလွှင့်ပြီး အကြည်ညိုပျက်အောင် သံဃာထုကြား သွေးခွဲသပ်လျှို ပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်က ဖယ်ရှားဖို့အတွက် သာသနာရေးဦးစီးဌာနကနေ အာဏာစက်သုံးပြီး ခြိမ်းခြောက် ပြန်ပါတယ်။ မကြာခင်မှာ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်ကို န၀တရဲ့ အတွင်းရေးမှူး (၁) ဖြစ်တဲ့ စစ်ထောက်လှမ်းရေး အကြီးအကဲ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွှန့် ကိုယ်တိုင် အရှက်မရှိ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ရောက်လာပါတယ်။ ဆရာတော်ကို ဦး(၃)ကြိမ်ချ ကန်တော့ပြီး (၃)ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်လှုဒါန်းတာတွေ၊ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်အတွက် ဘက်စုံမွမ်းမံရေး ကော်မတီဖွဲ့ပြီး အလှူငွေ ကောက်ခံကြပါတယ်။
ဒီအကြောင်းတွေကို န၀တပိုင်သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားကနေ လွှင့်ထုတ်ပြီး ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသယောင် ဗန်းပြကြော်ငြာကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သာသနာရေးဝန်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးညွှန့်က ပိဋိကတ် ( ၃ ) ပုံ အာဂုံဆောင်နိုင်တဲ့ သံဃာဆိုတာ အင်မတန်မှ ရှားပါးလှပြီး ပေါ်ပေါက်ရန် ခဲယဉ်းတဲ့အတွက်ကြောင့် ဘုရားငယ်တစ်ဆူပါပဲလို့ ဆရာတော်ကို တင်စား ပြောဆိုသွားတယ်လို့ ကြားရ ပါတယ်။ ဒီလိုဆို န၀တဟာ ဘုရားငယ်ကို ထောင်ချပြီး ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် အတင်းအဓမ္မ လူဝတ်လဲစေတယ်လို့ပြောရင် န၀တ ငြင်းဦးမှာလားလို့ ကျနော် မေးခွန်း ထုတ်ချင်ပါတယ်။
န၀တဟာ သာသနာတော်ကို ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ဖျက်ဆီးနေတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော် သက်ရှိထင်ရှား ရှိနေရင်တောင် န၀တဆိုတဲ့ ဖက်ဆစ်ဘီလူးတွေဟာ သူ့အကျိုး ထိခိုက်လာမယ်ဆိုရင် ဘုရားကိုတောင် ထောင်သွင်းအကျဉ်းချဦးမှာ သေချာနေပါတယ်။ န၀တဟာ သူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ဆိုရင် ဘာသာ၊ သာသနာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဆရာတော်ဦးသုမင်္ဂလာလင်္ကာရအပေါ် ကျူးလွန်ခဲ့တာတွေ ကြည့်ရင် ပြတ်ပြတ်သားသား မြင်နိုင်ပါတယ်။
ဆရာတော်ဟာ အင်းစိန်ရွာမပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကျောင်းမှာ သီတင်းသုံးပြီးရဟန်းများ၊ သီလရှင်များကို စာသင်ကြားပို့ချနေတဲ့ ဆရာတော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အဘိဓမ္မာ ပညာရပ်များမှာ အထူးတတ်ကျွမ်းနားလည်ပြီး စာသင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်း ရှင်းလင်းအောင် သင်ကြားနိုင်တဲ့ အရည်အသွေးရှိတဲ့ စာချတိုက်အုပ် ဆရာတော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ရဲ့ သင်ကြားမှုကောင်းမွန်တာကြောင့် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်က သံဃာတော်တွေ အမြဲလို ကြွချီလာတတ်တာကြောင့် ဆရာတော်ရဲ့ ကျောင်းတိုက်မှာ နှစ်စဉ်သံဃာအပါး (၅၀၀) နီးပါး ရှိတတ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ရေးသားထုတ်ဝေတဲ့ ဗုဒ္ဓ အဘိဓမ္မာ ကျမ်းစာအုပ်တွေဟာ ရဟန်းသံဃာအများ မရှိမဖြစ် ကိုင်ဆောင်တတ်တဲ့ စာအုပ်တွေအဖြစ် ကျော်ကြားလှပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်တွေကိုလည်း ဗုဒ္ဓစာပေတွေ ဖြန့်ချီရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေမှာ တွေ့ရတတ်ပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးမှူးတဲ့ အင်းစိန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်က ရဟန်းတွေလည်း သံဃာ့စာမေးပွဲများမှာ ပထမကျော်အဆင့်အထိ ရရှိတတ်ပါတယ်။ ဘာသာရေးအရ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှုကို ရန်ကုန်တိုင်းရှိ သံဃာအများအပြားကြား လှုံ့ဆော်ဝါဒဖြန့်တယ်လို့ န၀တက စွပ်စွဲလိုက်ပြီး “ပိဋိကတ်ကို ဖျက်တဲ့ ကြွက်စုတ်” ဆိုတဲ့ကဗျာကို ဆရာတော်က ရေးသားတာ ဖြစ်တယ်လို့ ထပ်မံ စွပ်စွဲပါတယ်။
မန္တလေးမြို့မှာ ဘာသာရေး ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှု အရှိန်မြင့်တက်နေချိန်မှာ ကံဆောင်သပိတ်မှောက်နေတဲ့ ဆရာတော့် ကျောင်းတိုက်ကို သပိတ်လှန်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အင်းစိန်မြို့နယ် မ၀တဥက္ကဌနဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအံ့မောင်တို့ ရောက်ရှိလာပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျောင်းတိုက်ရဲ့ ၀င်ပေါက်မှန်သမျှကို စစ်တပ်နဲ့ ပိတ်ဆို့လိုက်ပြီး ရဟန်းသံဃာအားလုံး တစ်ပါးမှ ဆွမ်းခံမထွက်ကြရန်နဲ့ အ၀င်အထွက် လုံးဝမလုပ်ကြဖို့ တားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ပြီးတော့ အင်းစိန်မ၀တနဲ့ သာသနာရေး ဦးစီးဌာနကနေ ဆွမ်းကပ်ပါတယ်။ ဆရာတော်က ဘာမှ တုန့်ပြန်ပြောဆိုခြင်းမရှိပဲ နေလိုက်ပြီး ဆွမ်းစားချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာ တုန်းမောင်း ခေါက်လိုက်ပါတယ်။
စာသင်သား သံဃာတွေဟာ ဆွမ်းစားဆောင်အတွင်း တန်းစီကြွလာကြပါတယ်။ ဆရာတော်က သံဃာအများကို ဒီကနေ့ ဆွမ်းအလှူရှင်ကတော့ အင်းစိန်မြို့နယ် မ၀တ ဥက္ကဌနဲ့ သာသနာရေးဦးစီးဌာနတို့က ဆပ်ကပ်လှူဒါန်းတာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းတို့အနေနဲ့ ဆွမ်းအလှူရှင်များကို မေတ္တာပို့ စားသုံးနိုင်ကြောင်း မြွက်ကြားပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဆွမ်းစားဆောင်အတွင်း ရောက်ရှိလာကြတဲ့ သံဃာအပါး (၅၀၀) ခန့်ဟာ ဆွမ်းဘုဉ်းမပေးတော့ပဲ နေရာကနေ တစ်ပါးမကျန် ပြန်လည် ထွက်ခွာသွားကြပါတော့တယ်။
အင်းစိန် မ၀တဥက္ကဌဟာ အကြီးအကျယ် အရှက်ရပြီး သံဃာအပေါ် အမျက်ထွက်သွားပါတယ်။ ဆရာတော်က အင်းစိန် မ၀တ ဥက္ကဌနဲ့ ဦးအံ့မောင်တို့ကို ဘုန်းကြီးအနေနဲ့ သံဃာတွေအပေါ် လှုံ့ဆော်စည်းရုံးမှုမရှိကြောင်း၊ သံဃာတော်အများရဲ့ ဆန္ဒကို မြတ်စွာဘုရား တောင်မှ မလွန်ဆန်နိုင်ကြောင်း ရှင်းပြပြောဆိုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရှက်တရားနဲ့ ဒေါသ၊ မောဟမီးတွေ တောက်လောင်နေသူတွေက ဒီဘာသာရေး သပိတ်ကို မလှန်ရင် ဖြစ်လာမယ့် နောက်ဆက်တွဲ အကျိုးဆက်တွေကို လုံးဝတာဝန်မယူကြောင်း ပြောဆိုပြီး ထွက်သွား ပါတယ်။ ကျောင်းတိုက် တံခါးတွေကိုလည်း (၁၂) နာရီကျော်မှ ပြန်လည်ဖွင့်ပေးပါတယ်။ သံဃာတော်တွေ ဆွမ်းငတ်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာမီပါပဲ ဆရာတော်ကို လာရောက် ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။
န၀တ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေနဲ့ ရဲတွေ ပူးပေါင်းပြီး ဆရာတော်ကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။ စားပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ တုတ်တစ်ချောင်းနဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည်တင်ထားပြီး “ကြိုက်တာရွေးစမ်း။ အသားမနာချင်ရင် ပုဆိုးဝတ်လိုက်။ ခင်ဗျားဟာ အခုအချိန်ကစပြီး လူဖြစ်သွားပြီ။ ခင်ဗျားတို့က သင်္ကန်းဝတ်တွေ၊ သံဃာအတုအယောင်တွေ”ဆိုပြီး ဆရာတော်ကို စွပ်စွဲပြီး “ခင်ဗျားစစ်ခုံရုံးမှာ ၀န်ခံရင် နှစ်နည်းမယ်။ ၀န်မခံရင် နှစ်လည်းများမယ်၊ အရိုက်လည်း ခံရမယ်။ အသက်ကြီးမှ အရိုက်မခံချင်စမ်းပါနဲ့။ အသက်ကြီးမှ မိုက်ကြတာကိုး ကြီးမိုက်တွေရဲ့ ”
ရုတ်ရင်းကြမ်းတမ်းတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ ဆရာတော်ကို စော်ကားပါတယ်။ ဆရာတော်မှာ စစ်ခုံရုံးမှာ တစ်လုံးတစ်ပါဒမှ ပြန်လည်ချေပ ပြောဆိုခွင့်မရပဲ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကံဆောင် သပိတ်မှောက်မှု ဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ( ၁၅ )နှစ် ရင့်ရင့်သီးသီး အမိန့်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ န၀တစစ်ဘီလူးတွေက သံဃာတော်တွေကို ဖမ်းဆီး၊ အတင်းအဓမ္မ လူဝတ်လဲစေပြီး သိက္ခာချ ပေမယ့်လည်း ရဟန်းတို့အနေနဲ့ စိတ်အတွင်းမှ သိက္ခာချခြင်း၊ လူအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုပါက ရဟန်းအရာ မြောက်ဆဲပဲဖြစ်ပြီး ဆရာတော်ကြီးတွေ အားလုံး ထောင်အတွင်းမှာလည်း ရဟန်းတို့ရဲ့ သိက္ခာပုဒ်၊ ၀ိနည်းတွေ စောင့်ထိန်းကြပါတယ်။
ဆရာတော်ကို ဖမ်းဆီးထောင်ချအပြီးမှာ ၁၉၉၀ နှစ်မှာ ဆရာတော်ကျောင်းတိုက်က သံဃာတစ်ပါးက သံဃာ့စာမေးပွဲမှာ ပထမကျော် ရရှိခဲ့ပေမယ့် ကံဆောင်သပိတ်မှောက်မှုထဲပါဝင်တဲ့ ကျောင်းတိုက်ဖြစ်တာကြောင့် ဆုကိုမပေးပဲ ထားခဲ့ပြန်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အဖမ်းမခံရခင် အချိန်အထိ ကမ္ဘာအေး သာသနာ့တက္ကသိုလ်မှာ အဘိဓမ္မာ ပါမောက္ခချုပ်နဲ့ နိုင်ငံတော် သံဃာ့ဝန်ဆောင်အဖွဲ့မှာ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကို အင်းစိန်ထောင်အတွင်း (၁)နှစ်နီးနီး ဖမ်းဆီးပြီးအကြာမှာ ဆရာတော်ကို ခံဝန်ချက်တောင် မထိုးခိုင်းတော့ပဲ ချက်ချင်း ပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ ထောင်က ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး ယခင်လုပ်ဆောင်နေကြ သာသနာ့ တာဝန်တွေကို ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။ ထောင်ကလွတ်မြောက်လာပြီး (၁)နှစ်နီးနီးအချိန်အထိ န၀တရဲ့ အထောက်အပံ့ကို လုံးဝမယူပဲ ကျောင်းတိုက်ရှိ သံဃာအပါး (၅၀၀) ကျော်၏ နေထိုင်ရေး၊ စာသင်ကြားရေးတို့ကို ဦးဆောင် လုပ်ကိုင်ခဲ့တယ်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ အချိန်မှာ ဆရာတော်အကြောင်းကို ကြားသိတာနဲ့ ဒေါ်စုနဲ့အတူ အင်းစိန်မြို့နယ် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တာဝန်ခံ ဗိုလ်ကြီးဝင်းထိန် (အငြိမ်းစား)၊ သခင်ဦးအုန်းမြင့်တို့ လိုက်ပါပြီး ဆရာတော်ကို သွားရောက် ဖူးမြော်ကြပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ဆရာတော်ကို ဖူးမြော်ပြီး ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီး နောက်တစ်နေ့မှာပဲ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဒု-၀န်ကြီးက ဆရာတော်ကျောင်းကို ရောက်လာပါတယ်။ အင်းစိန်ရွာမ ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်ကို တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ၊ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား ပေးအပ်လှူဒါန်းမည့်ပွဲကို အကျဉ်းဦးစီးဌာနအား အမိန့်နဲ့ဖယ်ရှားပြီး ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းလို့ခေါ်တဲ့ ကြံ့ဖွတ်အသင်းဌာနချုပ်ကနေ အဓမ္မ၀င်ရောက် လှူဒါန်းတာတွေ ပြုလုပ်ပါတယ်။
နောက်တော့ န၀တ အတွင်းရေးမှူး (၂) ရောက်ရှိလာပြီး ဆရာတော်ကို ကန်တော့ပါတယ်။ န၀တ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့က (၃) ထပ်တိုက် ကျောင်းဆောင်သစ်ကြီး ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းဖို့အတွက် ရေစက်ချပွဲတွေလုပ်ပြီး သူတို့မှားလေသမျှ အတွက် ဒေ၀ဒတ်တို့ တောင်းပန်ကြလေသလားဆိုတာ ကာယကံရှင်တွေ ကိုယ်တိုင်ပဲ သိပါလိမ့်မယ်။ နိုင်ငံအာဏာကို သိမ်းယူပြီး ကတည်းက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရဟန်းသံဃာတွေကို ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံ နဲ့ လက်ရောက်စော်ကားမှုတွေအတွက် ပျားရည်နဲ့ ၀မ်းချပွဲတွေလုပ်ပြီး သာသနာ့ ဒကာတော်တွေအဖြစ် ဖန်တီးနေကြပါတော့တယ်။
၁၉၉၈ ခုနှစ် လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ န၀တက သူတို့ကိုယ်တိုင် လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပိုင်းလေးအတွင်းကမှ သင်္ကန်းချွတ်၊ လူဝတ်လဲစေပြီး သင်္ကန်းဝတ်တွေ၊ ရဟန်းတု၊ ရဟန်းယောင်တွေလို့ မကြားဝံ့ မနာသာ ပုတ်ခတ်စော်ကားခဲ့ပြီး အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် (၁၅)ချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးတိလောကဘိဝံသကို သာသနာရေးမှာ ဒုတိယအဆင့်ရှိ “အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ” ဘွဲ့ကို ဆပ်ကပ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ န၀တရဲ့ ဘာသာရေးမျက်လှည့်ပြပွဲကို ကျနော်အနေနဲ့ ဘယ်လိုမှ နားမလည်တတ်အောင် ဖြစ်မိပါတယ်။
န၀တ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင် (ကွယ်လွန်) ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ “ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်ထားတဲ့အတိုင်း ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို တပည့်တော်ယုံကြည်ပါတယ်” တဲ့။
သာသနာကို ဖျက်ဆီး၊ ဘုရားသာသနာရဟန်းများကို ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်၊ သင်္ကန်းဝတ်တွေလို့ ရင့်ရင့်သီးသီးပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ န၀တတို့ သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ် (ကံ) နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တစ်ချိန်ချိန်မှာ သူတို့ခံစားကြရမှာ သေချာပါတယ်။
၁၉၈၉၊ ၁၉၉၀ နှစ်ဝန်းကျင်တုန်းကလည်း အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ နေထိုင်တဲ့ ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးရေ၀တက န၀တအစိုးရဟာ မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါးနဲ့ မကိုက်ညီတဲ့ အစိုးရဖြစ်ကြောင်း အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို သေးသိမ်ညှိုးငယ်အောင် ပြုလုပ်နေပါတယ်လို့ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ သတင်းဌာနတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကို န၀တက သူတို့ပိုင် သတင်းစာတွေကနေ ဆရာတော်အား စော်ကားသည့် အသုံးအနှုန်းတွေနဲ့ ပုတ်ခတ် စော်ကားပါတော့တယ်။
ဆရာတော်ဟာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ ဆွမ်းကိစ္စ အခက်အခဲဖြစ်လို့ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေတို့နဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ဆွမ်း၊ ကွမ်း ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်၊ ဆရာတော်ရဲ့ ဒေါက်တာဘွဲ့ ဆိုတာကလည်း ဆေးကုလို့ရမယ် မထင်ပါနဲ့လို့ အမနာပ စွပ်စွဲပြောဆိုပါတယ်။
ဒီကိစ္စတွေကို န၀တအနေနဲ့ လိမ်လည် ဖုံးကွယ်ထားလို့ မရပါဘူး။ အဲဒီနှစ်ပိုင်းက သတင်းစာတွေထဲမှာ ရေးသားထားတာတွေဟာ န၀တ ကိုယ်တိုင် ကျူးလွန်ထားတဲ့ သာသနာရေး စော်ကားမှုတွေဖြစ်ပြီး သမိုင်းစာမျက်နှာစာမှာ အရုပ်ဆိုးစွာ တင်ကျန်ခဲ့မယ့် အရာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်မကြာခင် ၁၉၉၄-၁၉၉၅ခုနှစ်ထဲမှာ ဆရာတော် ဒေါက်တာဦးရေ၀တကို သူတို့တွေ စော်ကားချင်တိုင်း စော်ကားလို့ အားရတော့မှ န၀တ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေ ကိုယ်တိုင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာ တည်ထားမယ့် စေတီတော်အတွက် လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ကူညီဆောင်ရွက် ပေးပါ့မယ်လို့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ဘာသာရေးသပိတ် ဆင်နွဲမှုကြောင့် မြန်မာပြည် အနှံ့အပြား ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးတွေကို အဓမ္မ ဖမ်းဆီးနေတဲ့ အထဲမှာ ရန်ကုန် ရန်ကင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မေဒေးနီ ကျောင်းတိုက်က တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကြီး တစ်ပါးလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ အဲဒီဆရာတော်ကြီးကို ၁၉၉၁ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်အင်းစိန်ထောင်မှာ လူဝတ်လဲပြီး ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။ ဆရာတော်ကြီးလည်း အဆောင်(၅) မှာ နေထိုင်ပြီး ထောင်ဒဏ်နှစ်ရှည်ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီး ထောင်မှ မလွတ်မြောက်ခင်မှာ ဆရာတော်သီတင်းသုံးတဲ့ ကျောင်းတိုက်က ဒုတိယကျောင်းထိုင်ကို န၀တက သွေးခွဲစကားတွေ ပြောပြီး တိုက်အုပ်နေရာကို သိမ်းယူဖို့ သွေးထိုးပေးပါတယ်။ ဆရာတော် ထောင်က လွတ်မြောက်လာတဲ့အခါမှာ ကျောင်းတိုက်မှာ တိုက်အုပ်ဆရာတော်အသစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားပြီး ဖြစ်တာကြောင့် ဒီကျောင်းတိုက်နဲ့ မသက်ဆိုင်တော့ကြောင်း ပြောကာ ဆရာတော်ကို ကျောင်းတိုက်မှာ နေထိုင်သီတင်းသုံးခွင့် မရအောင် န၀တအရာရှိတွေက ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဒု-တိုက်အုပ်ဆရာတော်ကိုလည်း ပြတ်သားစွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ လိုအပ်ပါက သာသနာရေးဦးစီးဌာနက အာဏာစက် အသုံးပြု ပေးမယ်ဆိုပြီး သံဃာထုအကြား သွေးခွဲဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။
န၀တဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ခုတည်းကိုပဲ ချိုးဖောက်စော်ကားတာတင် မဟုတ်သေးပါဘူး။ အခြားဘာသာတွေကိုလည်း ဖိနှိပ်ချေမှုန်း နေပါသေးတယ်။ ကျနော် အင်းစိန်ထောင်မှာ ရှိနေစဉ် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်းမှာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်မှာ တိုက်ပွဲတွေအများအပြား ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကရင်လူမျိုး အများအပြားကို နိုင်ငံတော်ပုန်ကန်မှုဆိုပြီး ထောင်ဒဏ် (၂၅)နှစ် အသီးသီးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ န၀တက ဘိုကလေးမြို့ ပစ်ခတ်မှုတွေမှာ ကြိုတင်စီမံချက်တွေဟာ ခရစ်ယာန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတွေက ခေါင်းဆောင် စည်းဝေးခဲ့ကြတယ်လို့ သတ်မှတ် ကြပါတယ်။ အဲဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးနောက် ဘိုကလေးမြို့နယ်အတွင်း ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ၊ အသင်းအုပ်ဆရာတွေကို ဖမ်းဆီး ထောင်ချခဲ့ပါတယ်။
ခရစ်ယာန်အသင်းအုပ်ဆရာတွေဟာ ထောင်ကျပြီး အင်းစိန်ထောင်က ကျနော်တို့ရှိနေတဲ့ အမှတ် (၃) အိပ်ဆောင်ကို ရောက်လာပါတယ်။ သူတို့ကို မေးမြန်းကြည့်တော့ ဘာဆိုဘာမှ မသိရပဲ န၀တစစ်တပ်က မဲမဲမြင်သမျှ အကုန်ဖမ်းဆီးပြီး ထောင်ချနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကရင်လူမျိုး အသင်းအုပ်ဆရာတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။ ထောင်ထဲရောက်တဲ့အထိ ရဲစခန်းနဲ့ စစ်ကြောရေးစခန်းတွေက တုတ်နဲ့ ရိုက်နှက်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ၊ စစ်ဖိနပ်နဲ့ ကန်ကြောက်ထားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေ မပျောက်သေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ခရစ်ယာန် သင်းအုပ်ဆရာတွေဟာ သူတို့ကို ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ပြီးသည့်တိုင် ကြောက်ရွံ့မှုတွေ မပျောက်ကွယ်သေးပဲ ရှိနေပြီး စကားတစ်ခွန်းမှ ပြန်မပြောနိုင်အောင် ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက် ခံခဲ့ရပါသေးတယ်။
ကျနော် အခု တင်ပြထားတဲ့ အချက်တွေဟာ ၁၉၉၁ ခုနှစ်က ရန်ကုန်အင်းစိန်အကျဉ်းထောင် အမှတ် (၃) အိပ်ဆောင် အတွင်း ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို တင်ပြထားတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော့်ကို ဒီဖြစ်ရပ်တွေ ပြောပြခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများ၊ တင်ပြခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေထဲမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဆရာတော်ကြီးများဟာ အခုတိုင် ရန်ကုန်မြို့မှာ သက်တော်ထင်ရှား ရှိနေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို သာသနာကို ချိုးဖောက်စော်ကားတဲ့ န၀တဟာ ဒီပြစ်မှုတွေကို လိမ်လည်ဖုံးကွယ်ထားသလို၊ နောက်ထပ် သံဃာတော်တွေကို နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်းမှုတွေ ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာ အများပြည်သူ သိအောင် ကျနော့်အနေနဲ့ တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေကို မသိယောင်ပြုပြီး - - -
တရားခံ ဘယ်သူတွေမှန်း မသိအောင် န၀တက မျက်လှည့်ပြတတ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့ န၀တဟာ သူတို့ကျူးလွန်ထားတဲ့ ပြစ်မှုတွေ အတွက် သွေးရူးသွေးတမ်း ကြောက်လန့်တကြား ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း သူတို့ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ် စစ်တပ်ကို ဖက်ဆစ်စနစ်ဆိုး ရောင်တော်ပြန် လွှတ်ဖို့ ဆောင်ရွက်နေပါတော့တယ်။
Posted by freeburma at 10:35 AM0comments
Posted by freeburma at 8:40 AM0comments
တစိမ့်စိမ့် စိမ့်ယိုစီးကျလာတဲ့ အော်ဟစ်မြည်တမ်းသံတွေ
"ရန်သူ အဆန့်ကျင်ခံရတာဟာ ကိစ္စဆိုးမဟုတ်ဘူး။ ကိစ္စကောင်းဖြစ်တယ်။
ရန်သူဟာ ခင်ဗျားကို နည်းနည်းဆန့်ကျင်လာပြီဆိုရင် ခင်ဗျားလုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် နည်းနည်းသက်ရောက်မှု ရှိလာလို့ပဲ။
ရန်သူက ခင်ဗျားကို တော်တော်လေးဆန့်ကျင်လာပြီဆိုရင် ခင်ဗျားလုပ်ရပ်တွေဟာ ပြည်သူတွေအတွက် တော်တော့်ကို ခရီးရောက်လာလို့ပဲ။
ခင်ဗျားကို ရန်သူက အရူးအမူးဆန့်ကျင်လာပြီဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားလုပ်ရပ်တိုင်းဟာ ပြည်သူတွေအတွက် အထူးတလည် ကျေးဇူးပြုနေပြီလို့ ပြောလို့ရသွားပြီ။
အဲဒီလိုပဲ . . .
ခင်ဗျားကို ရန်သူက နည်းနည်းလေးမှ မဆန့်ကျင်တော့ဘူး။ ခင်ဗျားကို စကားထဲတောင် ထည့်မပြောတော့ဘူးဆိုရင် ခင်ဗျား လုပ်ရပ်တွေ ဆိုတာတွေကလည်း ပြည်သူတွေအတွက် ဘာမှ မပြောပလောက်တော့လို့ပဲ။ . . ."
တရုတ်ပြည် ကွန်မြူနစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကြီး မော်စီတုန်းက သူ့ အမှတ် (၈) တပ်နီတော်နှင့် အမှတ် (၄) တပ်မတော်က ရဲဘော်တွေနှင့် ကေဒါတွေကို အကြိမ်ကြိမ် ပြောပြသင်ကြားခဲ့ဖူးတဲ့ သင်ကြားချက်တစ်ခုပါ။
"ကျွန်ုပ်တို့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားများအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလ အခြေခံမူများအဖြစ် . . .
(၁) ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကို အခြေခံသည့် နိုင်ငံရေးဖြေရှင်းမှု ဖြစ်ရမည်။
(၂) တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်း ဖြစ်ရမည်။
(၃) ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပန်းတိုင်ကို ဖော်ဆိုင်နိုင်ရမည်ဟု ရပ်တည်စွဲကိုင်ထားသည်။
ဤအခြေခံမူများအပေါ်တွင် ရပ်တည်၍ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ အဖြေရှာရေးတို့အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။"
၂၀၀၆ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက်နေ့မှာ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ခိုင်မာတဲ့ ရပ်တည်ချက်ကို အခုလို တိတိပပ ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။
ဒီရပ်တည်ချက်များကို "နအဖ စစ်အုပ်စု သဘောတွေ့နိုင်/မတွေ့နိုင်"
ရှင်းပါတယ်။ ဘယ်လို တွေ့နိုင်မှာလဲ။
နအဖ စစ်အုပ်စုက "၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်" ဆိုတာကို "သူ့ရင်ဘတ်တည့်တည့်ကို စူးဝင်နေတဲ့ မြှားတစ်စင်း" လို ယူဆထားတာ။
"တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး" ဆိုတာ "သူ့အိတ်ထဲရောက်ပြီး ပိုင်ပြီးဖြစ်နေပြီလို့ သူထင်နေတဲ့ အာဏာကို ပြန်ဆွဲလုမယ့် မကောင်းဆိုးဝါး" လို့ နှလုံးပိုက်ထားတာ။
"ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးပန်းတိုင်" ဆိုတာ "ငါပေးချင်သလောက် သင်းတို့ ရနိုင်မယ့်အရာ၊ သင်းတို့စိတ်နဲ့ သင်းတို့ကိုယ် ရနိုင်ကောင်းတဲ့အရာ မဟုတ်" လို့ ရူးသွပ်စွာ မှတ်ယူထားတာ။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ သူ့အလိုနဲ့ ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် စစ်အုပ်စုဟာ မာယာများပါတယ်။
"ဒေါ်စုကို ၀ယ်လုိ့မရရင်၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကိုများ ၀ယ်လို့ရမလား။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အကုန်လုံးကို ၀ယ်လို့မရရင်တောင် တချို့ကို လူခွဲပြီး ၀ယ်လို့ ရမလား။"
Power တချို့ တက်လာခွင့်ကို အကန့်အသတ်နှင့် လွှတ်ပေး၊
ပြီးတော့ လိုင်းကြောင်သွားအောင် လူခွဲပြီးကစား၊
Power တွေကို ဟိုတိုး ဒီလျှော့လုပ်၊
တဖြည်းဖြည်း လိုင်းကြောင်လာပြီဆိုရင် NLD ရဲ့ Power ကိုရော၊ ဒေါ်စုရဲ့ Power ကိုပါ မသိမသာ ဖြိုချ၊
အချိန်တစ်ခုရောက်ရင် NLD လည်းပြို၊ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်လည်း မြောင်းထဲရောက်၊
ထောင်ထဲက စကားနဲ့ ပြောရရင် တစ်ခါတည်းနှင့် နှစ်ပယ်ရှင်းတဲ့နည်းပေါ့။
ပိုးကို ပိုးချင်းပြန်ကိုက်ခိုင်းတဲ့ ဂျပန်ပိုးသတ်ဆေး ပေါ်လစီ။
သူ့ရဲ့ ဥာဏ်နီဥာဏ်နက်တွေ၊ အကွက်သစ် အကွက်ဆန်းတွေ အကုန်ထုတ်သုံးတာ၊
၀ိုင်အဟောင်းကို ပုလင်းသစ်ထဲထည့်၊ တံဆိပ်သစ်ကပ်ပြီး ဈေးကွက်တင်ရောင်းကြည့်တာ၊
ရမလားလို့ သူ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ပုံရတယ်။ ရလိုက်ရင် အမြတ်ဆိုတဲ့ အကြံယုတ်နဲ့။
ရှစ်ဆယ့်ရှစ်အုပ်စုက သူ ထင်သလောက် မအဘူး။
ဘ၀နှင့်ရင်းပြီး သူတို့ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုကို သူတို့ အသေအချာ တည်ဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ကြပြီ။
သူ လှည့်သွင်းချင်နေတဲ့၊ သူ ဆင်ထားတဲ့အကွက်ထဲကို ဘယ်သူမှ မ၀င်ကြဘူး။
"မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး" ကို "အေးလွင်၊ ဇင်အောင်" လုပ်ပစ်လို့ ဘယ်လိုမှ မရဘူး။
သူလုပ်ရင် အရာရာဖြစ်တယ်။ သူ မစွမ်းတာ ဘာမှမရှိဘူးလို့ ဂုဏ်မောက်နေတဲ့လူ၊
ကြံတိုင်းမဖြစ်တော့ သူ ဘယ်လောက် စိတ်ဆိုးလိုက်မလဲ။
"ကျနော်တို့တတွေ ဒီနေရာမှာ လက်နက်မပါဘဲနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ လာပြီး စုဝေးနေကြတယ်။ စုဝေးနေကြတယ်ဆိုတာ အမှန်တရားအတွက် မတရားရင် ခေါင်းငုံ့မခံဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့ ဟုတ်တယ်မို့လား"
"ကျနော်တို့ ဘ၀များစွာ စတေးခဲ့ပြီးပြီ။
လမ်းတွေပေါ်မှာ အသက်ပါ ပေးခဲ့ပြီးပြီ။
ကျနော်တို့ကို ဘယ်ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးနှင့်မှ ချုပ်ချယ်လို့ ကြောက်မယ့်လူလား"
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၇) ရက်နေ့မှာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးရှေ့မှာ ပြောကြားလိုက်တဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်း ဖြစ်ပါတယ်။
တပြည်လုံး၊ တကမ္ဘာလုံး အသံဖိုင်တွေနှင့်ရော၊ ရေးကူးပြီးသား စာသားတွေနှင့်ပါ ဟိန်းဟိန်းထသွားအောင် ပျံ့နှံ့ခဲ့တဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပါ။
လူတိုင်း လိုက်ပြီး ရွတ်ကြ၊ ရွတ်ရင်းနှင့် အလွတ်တောင် ရမတတ် ဖြစ်သွားရတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပါ။ လူထု ရင်ထဲ တည့်တည့်ရောက်သွားတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေပါ။
စစ်အုပ်စုဟာ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ၀ယ်လို့ရမယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အဲဒီစိတ်ကူးပါ မိုးကြိုးအပစ်ခံလိုက်ရတဲ့နေ့ဟာ အဲဒီ မေလ (၂၇) ရက်နေ့ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ဆိုချင်တယ်။
စစ်အုပ်စုဟာ နည်းနည်းမှ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ဘူး။ သိပ်ကို သိသာတယ်။ ခွေးရူးတစ်ကောင်ရဲ့ ဒေါသမျိုးနှင့် ရှူးရှူးရှဲရှဲတွေ ဖြစ်ကုန်တယ်။
အိမ်ရှေ့မှာ မသိမသာ စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဆင့်ကနေ သိသိသာသာ စောင့်ကြည့်လာတဲ့အဆင့်၊
အပြင်ထွက်ရင် ဆိုင်ကယ်လေးငါးစီးနှင့် တောက်လျောက်လိုက်ပြီး နှောင့်ယှက်တဲ့အဆင့်၊
မိတ်ဆွေတွေ အိမ်ကိုလာလည်လို့တောင် မရလောက်အောင် ၀ိုင်းပြီး ပိတ်ဆို့တားဆီး ခြိမ်းခြောက်တဲ့အဆင့်၊
ရန်စောင်နေတဲ့ မျက်နှာတွေနှင့် ခါးထောက်လို့တမျိုး၊ လက်နောက်ပစ်လို့တမျိုး၊
လူမိုက်ဂိုက်တွေနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ဗြောင်ကျကျ ချိုးဖောက်ချင်တိုင်း ချိုးဖောက်လာတဲ့ အဆင့်တွေအထိ အတင့်ရဲ စော်ကားလာတော့တာပါ။
"ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားတွေဟာ သူ ၀ယ်ချင်တိုင်း အ၀ယ်ခံမယ့်သူတွေ မဟုတ်ဘူး။
လူထုကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာဖောက်မှာ မဟုတ်ဘူး။
လူထုတရပ်လုံး လိုအပ်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေကို လူထုနှင့်အတူ ရဲရဲရင့်ရင့် လက်တွဲချီတက် အရယူတော့မယ်" ဆိုတာ ထင်ရှားသည်ထက် ထင်ရှားလာနေတဲ့ ဒီရေမြင့်သစ်ကို သူ စိုးရိမ်လာတယ်။
သူ သိသိသာသာကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားလာတယ်။
"၁၉ နှစ် ရှိခဲ့ပါပြီ။
ကျနော်တို့ ကျောင်းတက်ခဲ့တုန်းက ကျနော်တို့ သင်ကြားလိုက်ရတဲ့ ပညာတွေဟာ
ကျနော်တို့ လူမျိုးတွေကို ဘယ်မှာလာပြီး အကျိုးပြုနိုင်တဲ့၊ တတ်မြောက်လောက်တဲ့ ပညာရပ်တွေ ဖြစ်ခဲ့လို့လဲ။
အဲဒီတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားဆိုတာ မတရားမှုကို ဘယ်တုန်းကမှ ငုံ့ခံခဲ့ရိုးထုံးစံ မရှိခဲ့ဘူး။
၁၉ နှစ် ရှိခဲ့ပေမယ့်
စေးထန်းတဲ့ ကတ္တရာလမ်းတွေကို၊ နက်မှောင် ကြမ်းကြုတ်နေတဲ့ ကတ္တရာလမ်းတွေကို ထုရိုက်ခွဲကြည့်လိုက်ပါ။
တစိမ့်စိမ့် ယိုစီးကျလာတဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ်ကျောင်းသားတွေရဲ့ သွေးစက်တွေဟာ ဒီကနေ့ထိအောင် အော်ဟစ်မြည်တမ်းနေတုန်းပဲ။
ဒါဟာ . . . ဒီမိုကရေစီ . . . ဒီမိုကရေစီ . . . ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာပဲ။"
၁၉ နှစ်မြောက် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံနေ့မှာ တစ်ဦးချင်း ရင်ဖွင့်ပြောဆိုကြတဲ့ပွဲမှာ . . .
ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးရဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲမှာ ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုဂျင်မီ စတဲ့ ရှစ်ဆယ့်ရှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ရင်ဖွင့် ပြောဆိုခဲ့ကြတယ်။
ဒီပွဲမှာပဲ . . .
ဒီကနေ့ မျိုးဆက်၊ ဒီကနေ့ အခုလက်ရှိ ကျောင်းတက်နေတဲ့ (New Generation) တွေလည်း တက်ရောက်ကြပြီး
သူတို့ ခံစားချက်ကို အခုလို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်ကတော့ ရန်ကုန်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်မှာ လက်ရှိပညာသင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ အခု တက်ရောက်သင်ကြားနေတဲ့ ကျောင်းမှာဆိုရင် ကျနော်တို့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေတယ်။
ဒီဆုံးရှုံးမှုကို ကျနော်တို့ ရအောင်
ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ရအောင် ယူတဲ့နေရာမှာ တရားဥပဒေဘောင်ထဲကပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ကျနော်တို့ဟာ တောင်းဆိုခဲ့တာပါ။
ကျနော်တို့ကို ဆူပူအုံကြွတယ်လို့ ပြောတယ်။
ကျနော်တို့ကို ဘယ်သူမှ မြှောက်ပေးခြင်းမရှိဘူးဆိုတာကို ကျနော်ပြောချင်တယ်။
"ပညာရေးဖြင့် ခောတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံကြီး တည်ဆောက်ပါ" လို့ ပြောတဲ့ နေရာမှာ . . . .
ကျနော်တို့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေး မရဘဲနဲ့
ခောတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံကို ဘယ်လိုဆောက်မှာလဲ၊ ဒါပဲ ကျနော်မေးချင်ပါတယ်။"
ဒီအသံတွေဟာ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားထုအဖို့ အမှောင်ထုကို ထွင်းဖောက်ပေးလိုက်တဲ့ လမ်းပြကြယ်တံခွန်၊
ဒီအသံတွေဟာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေအဖို့ ရဲဝံ့တည်ကြည်စွာ ရှေ့ကို ချီတက်လျှောက်လှမ်းသွားနိုင်ရေးအတွက် တိုက်စည်တိုက်မောင်းသံ၊
ဒီအသံတွေဟာ စစ်အုပ်စုအတွက်ကျတော့ ငရဲပွက်မယ့် အိပ်မက်ဆိုးတွေ ထမ်းပိုးလာတဲ့ မိုးကြိုးမုန်တိုင်း။
ဒီလို အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ ဇောချွေးပြန်နေတုန်းမှာပဲ . . .
သြဂုတ်လ (၁၉) ရက်နေ့က ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ဦးဆောင်တဲ့ "လောင်စာဆီဈေးနှုန်း ကျဆင်းရေး" ချီတက်ဆန္ဒပြပွဲဟာ သူ့အသဲကို လှံချက်ထပ်ထိသလို နအဖအဖို့ တော်တော်အထိနာပြီး စွေ့စွေ့ခုန်သွားစေပြန်ပါတယ်။
နအဖ စစ်အုပ်စုဟာ အဲဒီ ခံပြင်းဒေါသထွက်မှုတွေနှင့်ပဲ သြဂုတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ညအချိန်မတော်မှာ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ကမူးရှူးထိုး အတင်းလိုက်လံ ဖမ်းဆီးပါတော့တယ်။ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဒီလို ဖမ်းဆီးပြလိုက်ရင် ဆန္ဒပြပွဲတွေ မီးကို ရေနှင့် ငြိမ်းသတ်လိုက်သလို တခါတည်း ငြိမ်းသွားမယ်လို့ ထင်ပုံရပါတယ်။
စစ်အုပ်စုတွေရဲ့ တွက်ဆမှုတွေကတော့ မှားပြီးရင်း မှားရင်းပါပဲ။
ဆန္ဒပြပွဲတွေဟာ သူထင်သလို လုံးလုံး ငြိမ်သက်မသွားကြဘူး။
သြဂုတ် (၂၂) ရက်နေ့မှာ ဆက်ဖြစ်၊
သြဂုတ်လ (၂၃) ရက်နေ့မှာ ဆက်ဖြစ်၊
သြဂုတ်လ (၂၄)၊ (၂၅)၊ (၂၆) ရက်နေ့တွေမှာ ဆက်ဖြစ်၊ တစ်ရက်မှ နားသွားတာမျိုး မရှိဘဲ ဆက်တိုက်တွေဖြစ်၊
ရန်ကုန်မှာ ဖြစ်ရုံတင်မက မန္တလေးနှင့် အခြားမြို့ကြီးတွေမှာဖြစ်၊
ဟားခါးလို၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတောလို တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာဖြစ်၊
စစ်တွေလို ထားဝယ်လို ပင်လယ်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာဖြစ်၊
ပခုက္ကူလို တောင်တွင်းလို အပူပိုင်းမြေလတ်ဒေသတွေမှာဖြစ်၊
မိုးကုတ်လို တောင်ကြီးလို ရှမ်းရိုးမတွေပေါ်မှာဖြစ်၊
လပွတ္တာလို ဘိုကလေးလို မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာဖြစ်၊
တစ်စက်ကနေ တစ်မျက်နှာ ဖြစ်လာနေကြပြီ။
တစ်ပွဲကနေ နောက်တစ်ပွဲ၊ နောက်တစ်ပွဲကနေ နောက်ထပ်တစ်ပွဲ မီးတောက်တွေဟာ ခုန်ခုန်ပြီး မြန်မာပြည်အနှံ့ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေကြပါပြီ။
"ဒါတွေကို ဘယ်သူက နောက်ကွယ် ကြိုးကိုင်ပြီး အမိန့်ပေးစေခိုင်းနေတာလဲ"
နအဖ စစ်အုပ်စုကတော့ လျှာအရိုးမရှိတိုင်း၊ အရှက်မရှိတိုင်း ပြောချင်ရာ ပြောတော့မယ်။
သူ့ပါးစပ်နဲ့ ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့နည်းကို မသုံးဘဲ
"၈၈ ရဲဘော်ဟောင်းတစ်ဦး" ဆိုတဲ့ အရူးတစ်ယောက်ရဲ့ ပါးစပ်နဲ့ ပြောခိုင်းတယ်"
"ဒါတွေကို (ဒီဆန္ဒပြပွဲတွေကို) ကိုမင်းကိုနိုင်တို့ ကိုကိုကြီးတို့ အုပ်စုက ဖန်တီးတယ်"
"NLD က မြှောက်ပေးတယ်"
"NCGUB, NCUB နိုင်ငံတကာက ပြည်တွင်းရေး ၀င်ရောက်စွက်ဖက်သူများက နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်ပြီး အမိန့်ပေးစေခိုင်းတယ်"
တစ်ရက်တည်းတောင် မဟုတ်ဘူး။ ဆက်တိုက် အခန်းဆက် ဆောင်းပါးရှည်ရေးပြီး ရူးသွပ်ခဲ့တာပါ။
"မင်းကိုနိုင် ကြိုးမဲ့လေတံခွန် (သို့) တိုင်းပြည့်အန္တရာယ်" ဆိုတဲ့ တံဆိပ်ကပ် ဆောင်းပါးတွေရေးပြီး စက်တင်ဘာ (၁) ရက်နေ့က စပြီး အပုပ်ချ တိုက်ခိုက်စွပ်စွဲ ခြိမ်းခြောက်စေခဲ့တာပါ။
ဒါကို ကြည့်လိုက်ရင်ပဲ . . .
နအဖ ဘယ်လောက် အကျပ်ရိုက်သွားပြီလဲဆိုတာ သိသာနေပြီ။
နအဖ ဘယ်လောက် ကြောက်ဒူးတုန်နေပြီလဲဆိုတာ ထင်ရှားနေပြီ။
နအဖဟာ . . . ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကို ရမ်းနေပြီ။
အခုကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသားထုအခွင့်အရေးတွေအတွက် တောင်းဆိုတတ် တောင်းဆိုရဲသူလေးတွေကို ရမ်းနေပြီ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ကို ရမ်းနေပြီ။
တပြည်လုံးက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကို ရမ်းနေပြီ။
ကုန်ဈေးနှုန်းဒဏ်မခံနိုင်လို့ ကုန်းရုန်းထနေတဲ့ ပြည်သူတွေကို ရမ်းနေပြီ။
ပြည်ပရောက် အတိုက်အခံအဖွဲ့အစည်းတွေကို ရမ်းနေပြီ။
ကျနော်တို့ကို ချစ်ခင်စာနာကြတဲ့ နိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေနှင့် နိုင်ငံတကာပြည်သူတွေကို ရမ်းနေပြီ။
ရန်သူကတော့ မီးကုန်ယမ်းကုန် ရမ်းနေပြီ။ မီးကုန်ယမ်းကုန် ဆန့်ကျင်နေပြီ။
ကြိုက်သလို ရမ်းပြီး ကြိုက်သလို ဆန့်ကျင်ပါစေ။
ရန်သူ ဆန့်ကျင်တာ ခံရတာဟာ ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ပါတယ်။
သူကတော့ . . . သူ့အသည်းကို ကျွဲခတ်သလို ဖြစ်လာလေလေ ရမ်းလေလေ ဖြစ်လာတော့မှာပါ။
သူကတော့ သူ့လမ်းသူထွင်ရင်း၊ သူ့လည်းပင်းကို ညှစ်မယ့်ကြိုးကို သူကိုယ်တိုင် စိတ်ရှိလက်ရှိ ကျကျနန အစွမ်းကုန် ကျစ်နေပါပြီ။
သူ့အတွက် အနာဂတ်ဟာ သိပ်မကျန်တော့ပါ။ ။
Posted by freeburma at 10:41 AM0comments
ရိုးမ-၃ မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Posted by freeburma at 8:23 AM0comments